အစ္စရေးက ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသားများအား တတိယအကြိမ်မြောက် လွှတ်ပေး
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ရက်က အစ္စရေးသည် ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသား ၂၆ဦးကို လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ယခုဖြစ်ရပ်သည် အမေရိကန်၏ ကြားစေ့စပ်မှုကြောင့် ရခဲ့ရှိသော သဘာတူညီချက်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှု ဆွေးနွေးပွဲများ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရသူများအနက် ၀က်စ်ဘန့်ခ်မှ ၁၈ဦး၊ ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမမှ ဦးနှင့် ဂျေရုစလင်အရှေ့ပိုင်းမှ ငါးဦးတို့ပါဝင်သည်။ သူတို့သည် ရမ်မော်လာအနီး အိုဖာအကျဉ်းစခန်းမျ လွှတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အစ္စရေး အကျဉ်းထောင်ထဲမှ ပါလက်စတိုင်း ၁၀၄ဦးကို အသုတ်လေးသုတ်ခွဲကာ လွှတ်ပေးမည်ဟူသော ဇူလိုင်လက သဘောတူညီချက်အရ ယခုအချိန်တွင် သုံးကြိမ်မြောက် လွတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ငြိမ်ချမ်းရေး သဘောတူညီမှု စတင်နိုင်ခဲ့လျှင် သုံးနှစ်တာ ရပ်ဆိုင်းထားရာမှ ပြန်လည် အသက်ဝင်လာဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပါမည်။
ယခုလွတ်မြောက်လာသူများသည် အစ္စရေးတပ်သားများကို လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သူ၊ အစ္စရေးပြည်သူများကို အမုန်းပွားအောင် မီးထိုးပေးသူများနှင့် အထူးသဖြင့် ပဋိပက္ခများ၊ စစ်ပွဲများတွင် မိမ်ိချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည့်အပေါ် လက်စားချေလိုစိတ် ပြင်းထန်ခဲ့သူတို့ ပါဝင်သည်။ ပါလက်စတိုင်း နယ်မြေများကို အစ္စရေးတို့ ရယူခဲ့သော ၁၉၆၇ခုနှစ်မှ စတင်လျှင် ယခုအချိန်အထိ အဖမ်းခံခဲ့ရသော ပါလိုက်စတိုင်းသားများမှာ ၅၀၀၀ ခန့်ပင် ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
နေတန်ညာဟု၏ ပါလက်စတိုင်း အကျဉ်းသားလွှတ်ပေးကိစ္စသည် အစ္စရေးအစိုးရအတွင်း သဘောမကျကြောင်း ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ဂျူး လက်ယာယိမ်းသမား ပါလီ်မန်အမတ်များ အသိုင်းအ၀ုိင်းက ပြစ်တင်လျှင်ရှိသည်။ နေတန်ညာဟု ပါလက်စတိုင်းများကို တတိယအသုတ်အဖြစ် လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ချက်ချင်းပင် အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်နေခဲ့သော အိမ်အလုံး ၁၀၀၀ကျော်ပါသည့် အိမ်ယာစီမံကိန်းကို တည်ဆောက်တော့မည်ဟု ကြေညာလိုက်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ ဆွေးနွေးတင်ပြနိုင်မည့် UCSY IT Camp ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ် မည် အတွဲ (၁၅)၊ အမှတ် (၁)
Mon, 12/30/2013 - 17:41
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် နည်းပညာနယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပညာရှင်များ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးတင်ပြမည့် IT Camp ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ရွှေပြည် သာမြို့နယ်) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
IT နည်းပညာဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများကို နှီးနှောဖလှယ် ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းရှိ Professional အိုင်တီပညာရှင်များနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအကြား Link ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန်၊ မရှိသေးသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို သိရှိနိုင်ရန်၊ သိရှိပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ ယနေ့တွင် မည်သို့မည်ပုံ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည်ကို သိရှိနိုင်စေရန် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအားလုံး Barcamp ပွဲ ပြုလုပ်သကဲ့သို့ လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးတင်ပြနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ IT Camp ပွဲသို့ မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ပြီး ပွဲတက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် Register ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး www.itcamp. linktoucsy.com တွင် Join ဟူသော Menu မှတစ်ဆင့် Register ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Register ပြုလုပ်ပြီးပါက Mail ထဲတွင် Ticket ရရှိမှာဖြစ်သလို ထို Ticket ကို Download ပြုလုပ်ပြီး Print ထုတ်ယူလာရမည် ဖြစ်သည်။ လက်မှတ်မရှိသူများလည်း တက်ရောက်နိုင်ပြီး ပွဲမှအမှတ်တရပေးအပ်သည့် လက်ဆောင်များ၊ ကံစမ်းမဲများကို ပါဝင်ခံစားခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ပွဲတက်လိုသူများအနေဖြင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၀၂၆၃၃၆ သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
စံပြသဘင်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ပြောပြတဲ့ တင်ဇာမိုးဝင်း
အခုလက်ရှိ မဟာရန်ကုန် စံပြသဘင် ကိုတော့ ဟန်ဇာမိုးဝင်း၊ အဂ္ဂါမိုးဝင်း၊ တင်ဇာမိုးဝင်း တို့ မောင်နှမ သုံးယောက်က အတွဲ အညီညီနဲ့ ပရိသတ်ကို တင်ဆက်နေ ကြပါတယ်။ မောင်နှမ သုံးယောက် မှာတော့ တင်ဇာမိုးဝင်း က အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး အဂ္ဂါမိုးဝင်းကတော့ အငယ်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူ သဘင် မင်းသားကြီး ဦးမိုးဝင်း ရဲ့ အနုပညာအမွေကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း နေရင်း မြန်မာ့ ဇာတ်သဘင်ရဲ့ တိုးတက်မှု အတွက်ကိုလည်း ကြိုးစား ကြံဆနေကြ ပါတယ်။ ဟန်ဇာမိုးဝင်း နဲ့ တင်ဇာမိုးဝင်း တို့ နှစ်ယောက် အဓိကထားပြီး တင်ဆက်ခဲ့ကြ ရင်းက အခု ဆိုရင် မောင်ဖြစ်သူ အဂ္ဂါမိုးဝင်း ကလည်း စံပြ သဘင်ရဲ့ အနုပညာ အမွေကို ဆက်လက် ထမ်းရွက်နေပါပြီ။
အစ်မကြီးဖြစ်သူ တင်ဇာမိုးဝင်းကတော့ မောင်ဖြစ်သူ ဟန်ဇာမိုးဝင်းနဲ့ အဂ္ဂါမိုးဝင်း တို့ နှစ်ယောက်စလုံးကို အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲတမ်း ကြိုးစားဖို့ တွန်းအားပေး လျက် ရှိပါတယ်။ ဇာတ်သဘင်လောက ထဲ ဝင်ရောက်လာတာ သိပ်မကြာသေးတဲ့ အဂ္ဂါမိုးဝင်း ကိုတော့ အားရမှု သိပ်မရှိသေး ကြောင်းပြောလာတဲ့ တင်ဇာမိုးဝင်း က “အဂ္ဂါကိုတော့ ဒီထက်ပိုပြီး ဖြစ်စေချင်တယ်။ အဂ္ဂါက နည်းနည်းတော့ စိမ်းနေသေး တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူလည်း ကြိုးစား ရှာပါတယ်။ အဂ္ဂါကတော့ ဒီ ထက်ပိုပြီး ကြိုးစား ရပါဦးမယ်။ ဟန်ဇာ အနေနဲ့လည်း ဒီထက်ပိုပြီး ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်သလို၊ အစ်မ အနေနဲ့ လည်း ကြိုးစားရဦးမှာပါ” လို့ ပြောပြလာပါတယ်။ စံပြသဘင် အနေနဲ့ အခုအချိန် အထိ တည်တံ့နေ နိုင်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကကော ဘာလဲလို့ တင်ဇာမိုးဝင်း ကို ဆက် မေးတော့
“ဒီစုစည်းမှုကို ထိန်းသိမ်းနေ တာကတော့ အစ်မတို့ရဲ့ အမေပါပဲ။ အဲဒီကမှ နောက်တစ်ဆင့် အဖေ ပေါ့။ ထင်းချောင်း တစ်ချောင်းတည်းကို ချိုးရတာ လွယ်ပေမယ့် ထင်းစည်း တစ်စည်းလုံးကို ချိုးရတာ မလွယ်ဘူး ဆိုတဲ့ အတိုင်း စည်းလုံးခြင်းက အင်အားပါပဲ။ မိသားစုတွေ စည်းလုံးလို့ လည်း စံပြသဘင် ဆိုတာကို ပရိသတ်တွေက အခု အချိန်အထိ လက်ခံ အားပေးနေတာပါ” လို့ သူတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ပီတိဖြစ်စွာ ပြောပြလာပါ တယ်။ တင်ဇာမိုးဝင်း တို့ စံပြသဘင် အဖွဲ့က ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ မှ ၃၁ ရက်နေ့ အထိ မိုးကောင်း ဘုရားပွဲမှာ ကပြရမှာဖြစ်ပြီး နယူးရီးယား ညကို တော့ ပွဲကရင်းပဲ ဖြတ်သန်း မှာဖြစ်ပါတယ်။ နယူးရီးယား လိုနေ့မျိုးတွေမှာ လူငယ် သဘာဝ ပျော်ချင်ပေမယ့် ပွဲကတဲ့ရက်တွေနဲ့ အမြဲ တိုက်နေတဲ့အတွက် ပွဲကရင်း ပရိသတ်တွေနဲ့ပဲ နှစ်စဉ် ဖြတ်သန်းဖြစ်နေကြောင်း တင်ဇာမိုးဝင်း က ဆိုပါတယ်။
ကြံရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်ရှိလာသော်လည်း ကြံသကာချက်လုပ်ခြင်းထက်ထက် သကြားစက်ရုံများသို့ ကြံသွင်းခြင်းအား တောင်သူများပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာ
အောင်လံ၊ ဇန်နဝါရီ ၁။
အောင်လံမြို့နယ် အတွင်း ကြံရိတ်သိမ်းရာသီရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သော်လည်း ကြံစိုက်တောင်သူအများစုမှာ သကြားစက်ရုံများသို့ ကြံရောင်းချခြင်းကို ကြံသကာချက်လုပ်ခြင်းထက် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြကြောင်း အောင်ညီသာကျေးရွာနေ ကြံစိုက်တောင်သူတစ်ဦးကပြောသည်။
“ ကြံသကာချက်တာက အဆင့်ဆင့် ဆက်လုပ်နေရသေးတယ်လေ၊ အရည်ကြိတ်တာ ပြီးတော့ချက်ရတာနဲ့ ချက်ခြင်းမဖြစ်ဘူးလေ၊ နောက်ဈေးကလည်း မငြိမ်တော့ စိုးရိမ်ရတယ်၊ မြတ်ချင်လည်း အရမ်း၊မနှစ်ကတော့ ရှုံးတယ်လေ၊” ဟု အောင်ညီသာကျေးရွာနေ ကြံစိုက်တောင်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
သကြားစက်ရုံများသို့ ကြံပေးသွင်းခြင်းမှာ ပြီးခဲ့သောနှစ်ကစ၍ ဈေးနှုန်းများမြင့်ပေးလာသောကြောင့် ကြံစိုက် တောင်သူများတွက်ချေကိုက်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါသည်။
“မနှစ်ကစပြီး ကြံတစ်တန် (၃)သောင်းပေးလာတော့ ၊ စိုက်ရတာ ကိုက်လာပါတယ်၊ အထွက်နှုန်းလေးကလည်း ကောင်းလာရင်တော့ ပြေလည်တာပေါ့” ဟု လက်ပန်ကန်ကျေးရွာကြံတောင်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ကြံစိုက်တောင်သူများအတွက် ကြံစိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေအဖြစ် တစ်ဧကလျှင်(၁)သိန်းနှုန်း ဘဏ်ချေး ငွေထုတ်ချေးပေးခြင်းကလည်း ကြံစိုက်တောင်သူများအဖို့ အဆင်ပြေစေကြောင်းလည်း ၎င်းကပင်ပြောပြသည်။
“နောက်ပြီး ဒီနှစ်တော့ စက်ရုံကလည်း ကြံခုတ်စရိတ်ကြိုတင်ပေးတော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့” ဟု တောင်သူတစ် ဦးကပြောပြပါသည်။
သို့သော် ကြံခုတ်ပြီးသားများအား အချိန်မှီလာရောက် တင်ဆောင်မှုမရှိခြင်းကတော့ ကြံစိုက်တောင်သူများအဖို့ များစွာနစ်နာမှုများဖြစ်နေသည်ဟုလည်း ကြံစိုက်တောင်သူအချို့က ပြောသည်။
“ ခုတ်ပြီးရင် မြန်မြန်စက်ရုံရောက်မှ အချိန် မလျှော့တာလေ၊ ခုတ်ပြီးလာမတင်လို့ အခင်းထဲမှာကြာနေရင်တော့ အရည်ခမ်းကုန်တော့ အချိန်လျှော့တာပေါ့” ဟုပြောပြပါသည်။
ခုတ်ချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်သောကြံခင်းပိုင်ရှင်များအဖို့လည်း ယခုဇန်န၀ါရီလသည်သာလျှင် နောက်ဆုံးခုတ်သင့် သည့် အချိန်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောသည်။ ဆောင်း၏ အအေးဓါတ်များ မကုန်ဆုံးမီ အမြန်ဆုံးခုတ်နိုင်မှသာ ကြံများ အရည်ခန်းခြောက်၍ အလေးချိန်လျှော့ခြင်း အရည်အသွေး ကျဆင်းခြင်းဘေးမှ ရှောင်နိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း လည်း ပြောသည်။
ဆလုံလူမျိုးတို့၏ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် ဥာဏ်ရည်များကို ဂျပန်တက္ကသိုလ်မှ လာရောက်သုတေသနပြုလုပ်
မြိတ်ကျွန်းစုအတွင်းရှိ ဆလုံလူမျိုးတို့၏ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် ဥာဏ်ရည်အနေအထားများကို ဂျပန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ ခုနစ်ရက်ကြာ လာရောက်သုတေသန ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ Otsuma woman University Tokyo မှ Dr. SEJI OHAWA နှင့် Dr.ATSUMO SHIMODU ပါဝင်သောအဖွဲ့မှာ မြိတ်ကျွန်းစု အတွင်းရှိ ဒုံးညောင်မှိုင်း၊ ဒုံးပုလဲအော်၊ ပလောဝမ်း စသည့်ကျေးရွာများမှ ဆလုံ လူမျိုးများကို ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ ၂၉ ရက်အထိ သုတေသန ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဆလုံလူမျိုးတွေ အများဆုံးရှိတဲ့ အဲဒီသုံးရွာမှာ သုတေသနပြုလုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားရွာတွေလည်း သွားရောက်လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဆလုံလူမျိုးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အနေအထားတွေ၊ ပညာရေးနှင့် ဥာဏ်ရည် အနေအထားတွေ သုတေသနပြုလုပ်တာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဆလုံလူငယ် ၄၀၀ ကျော်လောက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု သုတေသနအဖွဲ့နှင့် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေး ခဲ့သူ ဆလုံလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီး ဦးတင်စိုးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျွန်းစုမြို့နယ် အတွင်းရှိ ဒုံးညောင်းမှိုင်ရွာတွင် ၆၈ ဦး၊ ဒုံးပုလဲအော်ရွာတွင် ၂၇၂ ဦး၊ ပလောဝမ်းကျေးရွာတွင် ၇၀ တို့ကို သုတေသန ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “ဆလုံလူမျိုးတွေကို ဒီလိုလေ့လာ ခဲ့ရာမှာ တွေ့ရှိချက်တွေ ကတော့ ဥာဏ်ရည် ဥာဏ်သွေးပိုင်းတွေက တခြားလူမျိုးတွေနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကုန်းပေါ်က လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာလည်း တန်းတူ လုပ်နိုင် ပါတယ်။ ရေထဲမှာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ သူတို့က ရေပျော်တွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အများကြီး သာပါတယ်။ ဂျပန်တက္ကသိုလ် ကတော့ သူတို့တွေ့ရှိချက် ရလဒ်တွေကို တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရကို ပြန်လည်ပေးပို့ သွားမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက် ပေးသွားမှာပါ” ဟု တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီး ဦးတင်စိုးက ပြောကြား ခဲ့သည်။
ဆလုံ တိုင်းရင်းသားများမှာ ပညာရေးပိုင်းတွင် အားနည်းမှုနှင့် ရိုးသားကြောက်ရွံ့မှုများကြောင့် စီးပွားရေးသမား တချို့၏ အမြတ်ထုတ်မှု ခံနေရပြီး ပညာရေးပိုင်းနှင့် ဗဟုသုတများ တိုးပွားဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုကြောင်း သိရသည်။
သင်္ဘောပေါက်ကွဲမှုမှ ပျောက်ဆုံးနေသူများမှ သေဆုံးလျက် သုံးဦးပြန်တွေ့
မန္တလေး၊ ဇန်နဝါရီ ၁။
သူရိန်စိုးဝင်းသဘောင်္ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ပျောက်ဆုံးနေသူများထဲမှ ၃ဦးကိုသေဆုံးလျက်တွေ့ရှိထားကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေ သကြီး တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ မှုးရုံးမှ သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာလ၂၇ရက်နေ့ က မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ရတနာပုံ သဘောင်္ကျင်းတွင် နံနက် ၉နာရီ၁၅မိနစ် အချိန်ခန့်က သူရိန်ကျော်စိုးဝင်း OB -သံ-၁၁၅၅အလျား၂၄၅’၊ အနံ၄၅’၊ရေစူး၁၀’ခန့်ရှိ သဘောင်္မှာ ဆီဝမ်းလောင်တွဲမှ ၉၂အောက်တိန်းဆီ (၆)သိန်းခန့်အား ချထားပြီး ရန်ကုန်သို့ ကျောက်မျိုးစုံ(၁၈၆)ကျင်းတင်ကာ
ပြန်လည် ထွက်ခွာရန်အတွက် ကျောက်ဆူးရစ်ခုံအား အောင်ကိုဦး(ခ)အာနိုးနှင့် လွင်မိုးအောင်တို့မှ ဝရိန်ဆော်ရာမှ လက်ကျန်ဆီငွေ့ဖြင့် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၄င်းဂဟေဆော်ရာတွင်ပါဝင်သည့် အာနိုးနှင့် ကျော်ဆန်းဝင်းပါ၅ဦး၊ စုစုပေါင်း၆ဦးတို့မှာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ပျောက်ဆုံးနေခြင်းကို ရှာဖွေခဲ့ရာမှ ဒီဇင်ဘာလ၃၁ရက် နံနက်၇နာရီခွဲ အချိန်တွင်၎င်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားသည့်
နေရာနှင့်ပေ၂၅၀အကွာတွင်ပျောက်ဆုံးနေသောဇော်ဇော်(ခ)ဇော်ဇော်အောင်(၂၄)နှစ်၏ အလောင်းအား နဖူးချိုင့်ဝင်၊ ဝဲနားထင်ဖူးယောင် ဒဏ်ရာများဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ ပြီး ညနေ၃နာရီခွဲအချိန်တွင် ပျောက်ဆုံးနေသော အာနိုး(ခ) အောင်ကျော်ဦး၏ အလောင်းကို ရှမ်းလေးကျွန်းစုတွင် ယာမေးပုံပျက်၊ ယာလက်ဖျံကျိုးဒဏ်ရာများဖြင့် ပြန်လည် တွေ့ရှိခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ ပိုအပ်ထားရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဇန်နဝါရီ၁ရက်နေ့ မနက်၁၁နာရီ၁၀မိနစ်အချိန်တွင် ပျောက်ဆုံးနေသော ချစ်ကို(၂၄)နှစ်၏ အလောင်းကို မန္တလေး
ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ လာရောက်အပ်နှံထားကြောင်းလည်း သိရသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ စီနာဘန်မီးတောင် ပေါက်ကွဲ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းက စီနာဘန်မီးတောင်ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ထိ ဆက်လက် ပေါက်ကွဲနေဆဲမို့ ရာနဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံတွေ ထွက်ပြေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ မနက်က ၆ ကြိမ်တိုင် ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ ဒီ မီးတောင်ဟာ ၂၄၆၀ မီတာ မြင့်တယ်လို့ မီးတောင်ပညာရှင်က လေ့လာရေးစခန်းမှာ ပြောပါတယ်။
ပြာပူတိမ်တွေက ၂ ဒဿမ ၅ကီလိုမီတာထိ မြင့်တက်နေတယ်လို့ ဆူပရီယာတီ အန်ဒြီယာ စွတ်တီက ပြောပါတယ်။
မီးတောင်ဟာ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ လောက် လှုပ်ရှားမှု မရှိတဲ့ မီးတောင်မြုံဖြစ်ပြီး လတ်တလော လတွေအတွင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပေါက်ကွဲခဲ့လို့ အစိုးရက အမြင့်ဆုံးအဆင့် တပ်လှန့် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အမျိုးသားကပ်ဘေး စီမံခန့်ခွဲမှု အေဂျင်စီကတော့ လူပေါင်း ၁ သောင်း ၉ ထောင်ကျော်ကို အရင်လတွေက နေရာရွှေ့ပြောင်းပေးထားပြီး အစိုးရက စီစဉ်ပေးတဲ့ ယာယီ စခန်းပေါင်း ၃၁ ခုမှာ နေနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ပြည်သူတွေကိုတော့ မီးတောင်အူကြောင်းကနေ ၅ကီလိုမီတာ ပတ်လည် အဝေးမှာ ဆက်နေဖို့ အကြံပြု ထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့စတုတ္ထ လူအထူထပ်ဆုံးနုိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားဟာ ပစိဖိတ်မီးကွင်းကြီးလို့ ခေါ်တဲ့ ကျောက်လွှာပြတ်ရွေ့ကြီး ၂ ခုကြားမှာ ရှိလို့ မီးတောင်ရှင် အလုံး ၁၃၀ နီးပါးရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်က လူဦးရေ သိပ်သည်းတဲ့ ယိုဂျကာတာမြို့နားမှာ မေရာပီမီးတောင် ပေါက်ကွဲခဲ့လို့ လူ ၃၅၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ပေါက်တောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/သူများအသင်းမှ (၂၂၉) နှစ်မြောက်နေ့တွင် ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်
( နိရဉ္စရာ- ၁ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၃) / လင်းမြတ် (ပေါက်တော)
ပေါက်တောမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အဖွဲ့(AAUSP) မှ ဦးဆောင်ပြီး (၂၂၉) နှစ်ပြည့်မြောက် ရခိုင့် ဘုရင့် နိုင်ငံတော်ကျဆုံးနေ့ ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ဆုတောင်းပွဲ အခမ်းအနား တစ်ခုကို ပေါက်တောမြို့ လောကထိပ်ပန် ဘုရားကြီး ရင်ပြင်ပေါ်တွင် ၂၀၁၃ ခု ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့ ညနေက ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ဆုတောင်းပွဲ အခမ်းအနားအား (၇)နာရီခန့်တွင် စတင်ကျင်းပရာ ပေါက်တောမြို့နယ်မှရဟန်းရှင်လူ (၃၀၀ ) ခန့် တက်ရောက်ပြီး အသျှင် နာဂိန္ဒ မော်ကွန်း (၃) ကြိမ်ရွတ်ဆိုကာ အခမ်းအနားကို စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ယင်းနောက်ပိုင်း တက်ရောက်လာသော ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များထံမှ ငါးပါးသီလ ခံယူ ဆောက်တည် ခဲ့ကြပြီး ရခိုင်ပြည်နှင့် ရခိုင်လူမျိုးအကျိုးအတွက် ကြိုးပမ်းရင်း ကျဆုံးခဲ့ကြသူများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းမူ ရရှိစေရန် ဆုတောင်းခဲ့ကြသည်။
ဆုတောင်းပွဲကျင်းပရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး AAUSP နာယကတစ်ဦးမှ အတိတ်ကို သင်ခန်းစာယူရန်နှင့် အနာဂတ် ရခိုင်ပြည်အတွက် အကောင်းနိုင်ဆုံး လုပ်ဆောင်ကြရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
“ ကျင်းပရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောရရင် ကြေကွဲဖွယ်ကောင်းတဲ့ သမိုင်းဝင် နေ့ရက် တစ်ရက်ကို အမှောင် ဖုံးခံနေရတဲ့ ရခိုင် လူငယ်တွေအနေနဲ့ မေ့ပျောက်မနေကြစေဖို့နဲ့ အတိတ်ကို သင်ခန်းစာယူပြီး လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်အတွက် အကောင်းဆုံး ရှေ့ဆက်နိုင်ကြရန်ရည်ရွယ်င်္ပြီး ကျင်းပရတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ယင်းကဆိုသည်။
ယင်းပြင် ရခိုင်လူငယ်များ အနေဖြင့် မိမိလူမျိုး၊ မိမိသမိုင်းကို မသိဘဲ မှားယွင်းစွာ ပျော်ရွင်နေကြားမှ ရုန်ကန် နိုးထစေရန် အဓိကရည်ရွယ်ကြောင်း သူကဆိုသည်။
အခမ်းအနားတွင် ကျဆုံးသွားသော ရခိုင်အာဇာနည်များအတွက် ရည်မှန်းပြီး လောကထိပ်ပန်ဘုရားကြီးအား ပန်းကပ်လှူ၊ ဆီမီး ၂၂၉ ခုတိတိကို ထွန်းညှိ ပူဇော်ကာ အမျှအတမ်းဝေခြင်း၊ မေတ္တာပို့ခြင်းနှင့် တစ်မိနစ်ခန့် ငြိမ်သက်စွာ အလေးပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် တက်ရောက်လာသောဆရာတော်၊ သံဃာတော်များ၊ ပေါက်တောမြို့ မြို့မိ မြို့ဖများထဲမှ ဆရာတော် ဦးစန္ဒသီရိ၊ ဆရာတော် ဦးအဉ္စန၊ ဦးသာထွန်းအေး၊ ဦးစောထွန်းစ်ိန်၊ ဒေါ်စိန်လှမေ၊ ဦးကျော်ဟိန်းနှင့် AAUSP အသင်းဝင်များမှ တက်ရောက် ဟောပြောခဲ့ကြသည်။
ပေါက်တောမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များတွင်လည်း အိမ်တိုင်းလိုလိုတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယင်းနေ့ ညနေ့ ဆီမီးပူဇော်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
အေတီချောင်းတွင် တံတားသစ်တစ်စင်း ထပ်မံတည်ဆောက်
လားရှိုး၊ ဇန်နဝါရီ ၁။
လားရှိုးမြို့၊ အထွက်(မူဆယ်ဘက်သို့သွားလမ်း)သိန်နီ လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ အေတီချောင်း ပေါ်တွင် တံတားတစ်စင်း ထပ်မံတည်ဆောက်လျက်ရှိကြောင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
သိန်နီးလမ်းမကြီး၏ အနေအထားသည် တံတားထိပ်(မူဆယ်ဘက်သို့သွားလမ်း) တွင် ပစောက်ပုံသဏ္ဍန် ချိုင့်ခွက် ဖြစ်နေသဖြင့် မိုးရာသီတွင် ချောင်းရေလျှံတက်ကာ ယင်းချိုင့်ခွက်အတွင်းသို့ ရေများမှာလမ်းမကြီးပေါ်အထက်သို့ ၅ပေကျော်မြင့်တက်လေ့ရှိသည်။
အေတီချောင်းပေါ်တွင် တံတားတစ်စင်း ရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း ယင်းချိုင့်ခွက်တွင် ရေများလျှံသဖြင့် ကား၊ဆိုင်ကယ်များ
ဖြတ်သန်းသွားလာမရသဖြင့် ခရီသွားပြည်သူများနှင့် ကျောင်းသား/သူများအတွက် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသောကြောင့် တံတားသစ်ကိုတည်ဆောက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက
“ အခု တံတားသစ်ကို ယင်းချိုင့်ခွက်ပေါ်မှာ တည်ဆောက်မှာပါ၊ တံတားဆောက်လုပ်ရတာကလဲ၊အဓိက မိုးရာသီဆို
ဒီချိုင့်ခွက်ထဲမှာကရေကြီးပြီးရေလျံဖြစ်တတ်လိုပါ့၊ ပြီးရင် ပြည်သူတွေ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေအောင်
ကျောင်းသူ/သားတွေသွားလာရေးလွယ်ကူစေတဲ့သဘောနဲ့ဆောက်တာပါ” ဟု ပြောသည်။
ယခု တံတားသစ်မှာ အရှည် ပေ ၁၆၀၊ အကျယ်ပေ ၄၀ ရှိကာ နှစ်လမ်းသွား၊ သံကူကွန်ကရစ် တံတားအမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ယမန်နှစ်က ၎င်းလမ်းမပေါ် ရေလွမ်းရေကြီးမှုမျာဖြစ်သဖြင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လားရိူး ) ၏အတန်းတင် စာမေးပွဲ (ပထမနေ့)အား နည်းပညာတက္ကသိုလ် ၌ကျင်းပနိင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အမှတ်(၃) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ရသည်။
အဆိုပါတံတားသစ်တည်ဆောက်ခြင်းအား နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တစ်ဦးက “အခုလို တံတားသစ် ထပ်ဆောက်တော့ ပိုပြီးကောင်းပါတယ်၊အရင်နစ်တွေဆို မိုးရွာ လို့ ရေကြီးရင် ကျောင်းကို သွားလာလို့ မရတော့ဘူး၊ အခက်အခဲတွေအမျာကြီး ရှိတယ်၊ အသစ်ထပ်ဆောက်တော့ အာလုံးအတွက် အဆင်ပြေ သွားတာပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့ အတွက်ရော ခရီသွားပြည်သူတွေအတွက်ပါ၊ မြို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလဲ ရှိလာတာပေါ့၊ မဟုတ်ရင် မိုးရွာတိုင်းလားရှိုးရေကြီးတဲ့ သတင်းတွေပဲ နေ့တိုင်းဖတ်နေရတာ၊ မြို့ခံတစ်ဦးအနေနဲ့ ရှက်မိတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယင်းအကျိုးဆက် များကြောင့် တရုတ်-မြန်မာ နစ်နိင်ငံ ကုန်စည်စီးဆင်း မူများ ခေတ္တပြတ်တောက်ခဲ့ရ သည်။ ယခုတံတားသစ်ကို ၂၀၁၃၊ ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်တည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ပြီးစီးမည်ဖြစ်ကာ အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ယူ တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမှသိရသည်။
အာဏာရသူများ ရှုံးနိမ့်နိုင်သည့် အနေအထား ဖြစ်ပေါ်လာပါက ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုများ ပြုလုပ်လာနိုင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်နိုင်ရေး စတင်လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း ပါမောက္ခ လာရီဒိုင်းမွန်း သတိပေး
ပါမောက္ခ လာရီဒိုင်းမွန်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားစဉ်
လက်ရှိအာဏာရယူထားသူများ အနေဖြင့် ဆက်လက်ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်နိုင်သည့် အနေအထား ဖြစ်ပေါ်လာပါက ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုများ ပြုလုပ်လာနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် လက်ရှိကာလမှ စတင်ကာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား စတင်ပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း ပါမောက္ခလာရီဒိုင်းမွန်းက သတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ပါမောက္ခလာရီဒိုင်းမွန်းသည် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အမေရိကန် စတမ်းဖို့တက္ကသိုလ်တွင် သုတေသနနှင့် သင်ကြားပို့ချမှု ပြုလုပ်နေသူဖြစ်ကာ Journal of Democracy ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယင်းဂျာနယ်မှ အယ်ဒီတာတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်စဉ်က မဲမသမာမှုများ၊ မဲလိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများမှ စောင့်ကြည့်ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သကဲ့သို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း အတိုက်အခံပါတီဖြစ်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ မျိုးဆက်သစ်လှိုင်း စသည့်အဖွဲ့အစည်းများက လူငယ်များ စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီး မဲပေးရာတွင် မဲကိုဖယောင်းသုတ်မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း ဝေဖန်မှုများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“အာဏာလက်ဝယ်ရှိသူတွေက ရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတာသိရင် မဟုတ်တာ ပိုလုပ်လေ့ရှိတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်သူတွေ ဒီမိုကရေစီ ရရှိဖို့အတွက် မသမာမှုတွေ လုပ်ထားကြောင်း ထောက်ပြနိုင်တယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် နိုင်ငံတကာက ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေအနေနဲ့ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ အခုကတည်းက စတင်ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ နှစ်လသုံးလလောက် အလိုကျမှ ဖုတ်ပူမီးတိုက် ထလုပ်မယ်ဆိုရင် မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး” ဟု လာရီဒိုင်းမွန်းက သတိပေးပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မဲမသမာမှု၊ မဲခိုးမှု၊ မဲမသမာမှု၏ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများ စသည့်ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားမှု လျော့နည်းစေရန် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်မှုဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာများကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သတင်းမီဒီယာများသို့ ဖြန့်ဝေကူညီပေးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အခြေစိုက် (COMFREL) အဖွဲ့မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Mr.Koul Panha က ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း ပေါင်းကူးအဖွဲ့မှ ဒေါက်တာကျော်သူက ပြောကြားသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲ အများစုသည် မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ မဲမသမာမှုများ၊ မဲခိုးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတရန် ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိကာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ရာ၌ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြင့် လူပေါင်း ၁၁၀၀၀ ကျော် အားစုစည်းနိုင်ခဲ့ကာ ကုန်ကျစရိတ် အနည်းငယ်ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ရွေးကောက်ပွဲတွေကို စောင့်ကြည့်မှုတွေ ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် မမျှတမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို လျှော့ချနိုင်ပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘာတွေကူညီနိုင်မလဲ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်မှုဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာတွေကို ဖြန့်ဝေပေးခြင်းအားဖြင့် ကူညီပါ့မယ်” ဟု Mr. Koul Panha က ပြောကြားသည်။
“ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုလုပ်ရင် ပြဿနာ အများကြီးရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်မှု၊ သတင်းရယူမှုတွေအတွက် COMFREL ဆီမှာ နည်းပညာ အကြံဥာဏ်တွေ လိုချင်ရင် ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်” ဟု ပေါင်းကူးအဖွဲ့မှ ဒေါက်တာကျော်သူက ဆိုသည်။
ရွေးကောက်ပွဲတွင် စောင့်ကြည့်သူများ အနေဖြင့် အာဏာရ အစိုးရ၏ အတိုက်အခံပါတီ မဖြစ်ခြင်း၊ ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ အမှန်တရားကိုသာ ပြောဆိုခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ မှန်ကန်မှုရှိမရှိ အများသိရှိရန် ပြည်သူများ၏ ဝေဖန်ပြောကြားသံများ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများ ပြောကြားခြင်း၊ ထိုရလဒ်များကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ တင်ပြခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား အဓိကလုပ်ဆောင်ရကြောင်း Mr.Koul Panha က ပြောကြားသည်။
EMG သတင်းထောက် မခိုင်အား ဥပဒေကို လိုသလိုအသုံးပြု၍ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့မှု နှစ်ပတ်ပြည့်သည်အထိ တိုင်ကြားမှုများအတွက် ပြန်လည်ဆက်သွယ် ဖြေရှင်းပေးခြင်း မရှိသေး
လွိုင်ကော်မြို့မှ Eleven Media Group ၏ သတင်းထောက်မခိုင် (ခ) နော်ခိုင်ခိုင်အေးချိုအား သတင်းရယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်ကျော်နင်းမှု အပါအ၀င် ပုဒ်မသုံးခုဖြင့် လွိုင်ကော်မြို့နယ် တရားရုံးမှ ဒုမြို့နယ် တရားသူကြီး ဦးမြမင်းဟန်က ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ်သုံးလ ကျခံရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ရာ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် နှစ်ပတ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ပြစ်မှုပုဒ်မ ၄၅၁ သည် အိမ်ကျော်နင်းမှု၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၂၉၄ (ခ) မှာ ညစ်ညမ်းစွာ ပြောဆိုမှုနှင့် ပြစ်မှုပုဒ်မ ၅၀၀ အသရေဖျက်မှုတို့ဖြင့် ဥပဒေကို လိုသလိုအသုံးပြုကာ မတရား အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးပါရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်နှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌတို့ထံ အသိပေး တိုင်ကြားစာများ ပေးပို့ခဲ့သော်လည်း ယခုအထိ ပြန်လည်ဆက်သွယ် ဖြေရှင်းပေးခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
“ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့စွဲနဲ့ အသိပေးတိုင်ကြားစာကို The Daily Eleven သတင်းစာမှာ ထည့်သွင်းခဲ့သလို သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတို့ဆီကို တရားဝင် ပေးပို့ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအထိ ပြန်ဆက်သွယ်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးတာတွေ မရှိသေးပါဘူး။ သတင်းထောက်တစ်ယောက်က သတင်းယူတာကို အိမ်ကျော်နင်းမှုနဲ့ တရားစွဲ ထောင်ချခံရတာ ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိလို့လဲ၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီကလည်း တစ်စုံတစ်ရာ တုံ့ပြန်လာတာမျိုး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တရားလိုဘက်က လွိုင်ကော်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်နေလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ သတင်းထောက်က သတင်းရယူတဲ့ ကိစ္စနဲ့ အခုလို မတရား ထောင်ချခံထားရတာပါ။ The Ladies ဂျာနယ်မှာလည်း ပြေလွင်မြင့်ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဒီအမှုကိစ္စကို ရေးထားတာ တွေ့ရတယ်။ တရားရုံးက ထွက်ချက်တွေ၊ တရားခွင် စစ်ဆေးမှုတွေကို ရေးထားတယ်။ တရားလိုနဲ့ တရားခံဘက်ကပဲ ရနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို သူကဘာကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူ ရထားရတာလဲ စဉ်းစားစရာပါ။ တရားစီရင်ရေးနဲ့ တရားသူကြီးဘက်က မှန်ကန်တယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး ဘာလို့မစစ်ဆေးနိုင်ရတာလဲ။ မှန်ကန်မျှတတဲ့ စစ်ဆေးမှုလုပ်ပေးဖို့ ထပ်မံတောင်းဆိုပါတယ်” ဟု The Daily Eleven သတင်းစာ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဝေဖြိုးက ပြောပါသည်။
Eleven Media Group ၏ နယ်သတင်းထောက်မခိုင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည့် WAN-IFRA (ကမ္ဘာ့သတင်းစာများနှင့် သတင်းစာထုတ်ဝေသူများ အစည်းအရုံး)က သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံ မေတ္တာရပ်ခံစာ ပေးပို့ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ဂျာနယ်လစ်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီ (CPJ)နှင့် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့ (RSF) တို့က ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။
ထို့ပြင် Eleven Media Group ၏ လွိုင်ကော်သတင်းထောက်မခိုင် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသည့်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းသမဂ္ဂ၊ PEN Myanmar၊ မန္တလေး သတင်းသမားများတို့က သဘောထား ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ မြ၀တီမြို့နယ် စာရေးဆရာ အသင်းနှင့် သတင်းစာဆရာ အသင်းတို့က ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာဂျာနယ်လစ် ကွန်ရက်ကလည်း မခိုင်ထောင်ဒဏ် ကျခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဇန်န၀ါရီလ ၇ ရက်တွင် ဆန္ဒပြရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်နွှယ်သည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်မည့်သူများကို အင်းစိန်ထောင်ရှေ့တွင် စောင့်ဆိုင်းနေကြသူများအား ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - မင်းသိန်းနိုင်)
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူများ၏ မျှော်လင့်ချက်များ ရှင်သန်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၌ မျှော်လင့်ချက်ေ၀၀ါးခြင်းများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်။ အကောင်းများ ရှိခဲ့သော်လည်း အကောင်းထက် အဆိုးပိုများခဲ့သည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ၎င်းကိုယ်တိုင် သိရှိထားပြီး ဖော်ဆောင်ပေးမည်ဆိုသော ပြည်သူ့ဆန္ဒနှစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်စွမ်း မရှိခဲ့ချေ။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် အခြေခံ လူမှုစီးပွားဘ၀ တိုးတက်မြင့်မားရေးမှာ ပြည်သူလူထု၏ အဓိကဆန္ဒနှစ်ရပ် ဖြစ်သည်။
ယခု ၂၀၁၃ ခုနှစ် ကုန်ဆုံး၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော ရှိရင်းစွဲ စိန်ခေါ်မှုများထက် ပို၍ပမာဏကြီးသော စိန်ခေါ်မှုများ ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို မည်မျှအထိ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်နည်း။
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေး အခြေအနေ ရလဒ်မှန် ထွက်ပေါ်နိုင်မည်လား။ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်နိုင်မည်လား။ လယ်မြေသိမ်းယူမှု ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်လား။ အရှိန်ကောင်းနေဆဲဖြစ်သော ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများနှင့် ပုံစံတူဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အသွင်ဆောင် ပဋိပက္ခများ ဆက်ဖြစ်နေမှာလား။ မေးခွန်းများက စောင့်ကြိုနေသည်။
အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံနိုင်ငံ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး ၁၇ နှစ်ကြာမှ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၌ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ရရန် အခွင့်အရေး ပေါ်ခဲ့သည်။ သို့သော် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ အပါအ၀င် အခြားသော အခြေအနေများကြောင့် ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို လက်လွှတ်ခဲ့ရသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ရရှိခဲ့သည်။ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းဆဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အာဆီယံ၏ ဆုလာဘ်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်စဉ်များ တိုးတက်မှု ရှိ၊ မရှိ ဆိုသည်ကို နိုင်ငံတကာက စောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်သည်။
အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကြောင့် အာဆီယံအစည်းအဝေးပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဦးဆောင်ကျင်းပရမည် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ခုတည်း၌ ကျင်းပရမည့် ထိပ်တန်းအစည်းအဝေးပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ဇန်န၀ါရီလလယ်ပိုင်း၌ ပြုလုပ်မည့် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးက မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို အသက်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် မေလတွင် အာဆီယံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ (၂၄) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများ၊ ဇွန်လတွင် အာဆီယံ-အမေရိကန် အကြီးတန်း အရာရှိများ စကားဝိုင်း၊ ဇူလိုင်လတွင် (၄၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ သြဂုတ်လတွင် အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ ဖိုရမ်၊ အရှေ့အာရှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ စက်တင်ဘာတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက်မြို့၌ ပြုလုပ်မည့် အာဆီယံ-အမေရိကန် အစည်းအဝေး၊ အောက်တိုဘာတွင် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ (၂၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများ၊ အာဆီယံ + ၃ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ၊ အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ အစရှိသည်တို့ကို ဆက်လက်ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဖိအား
အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ယူထားချိန်တွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဖိအားများက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ရိုက်ခတ်နေမည် ဖြစ်သည်။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ၊ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အသွင်ဆောင် ပဋိပက္ခများ၊ တိုင်းရင်းသား ဒေသများ၌ ဖြစ်ပွားနေမည့် တိုက်ပွဲများနှင့် အခြားသော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမည် ဆိုပါက မျက်နှာပျက်စရာများ ရှိလာနိုင်သည်။
ထို့အတူ ပထ၀ီနိုင်ငံရေး မဟာဗျူဟာအရ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ အာရုံစိုက်မှု ချိန်ခွင်လျှာသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်လာမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်သည် မြန်မာက ဦးဆောင်တက်ရောက်ရမည့် အာဆီယံ-အမေရိကန် အစည်းအဝေးကို နယူးယောက်မြို့၌ စက်တင်ဘာလအတွင်း ပြုလုပ်ရန် ရည်မှန်းထားသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်က ရန်ကုန်မြို့သို့ လာခဲ့သည့် အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရတ်အိုဘားမားသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ (သို့မဟုတ်) နိုဝင်ဘာလတွင် နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ကနဦး သိရှိရသော သတင်းများအရ သမ္မတအိုဘားမားသည် နေပြည်တော်၌ ပြုလုပ်ရန်ရှိသော အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတက်ရန် ဆန္ဒရှိနေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်နှင့်အတူ မြန်မာ-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးမှာ ပို၍တိုးတက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး ထိုတိုးတက်မှုသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွက် မည်မျှအကျိုးဖြစ်ထွန်းမည် ဆိုခြင်းမှာ မရေရာသော အခြေအနေ၌ ရှိနေသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် မြန်မာ-တရုတ် ဆက်ဆံရေးက အားကောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံအကြား တောင်တရုတ်ပင်လယ် ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ချိန်တွင် ယတိပြတ် ပြီးပြတ်နိုင်ခြင်း မရှိချေ။ သို့ရာတွင် အမေရိကန်နှင့် ဆက်ဆံရေး အပါအ၀င် တောင်တရုတ်ပင်လယ် အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဖိအားပေးလာနိုင်မည့် အခြေအနေ ရှိလာနိုင်သည်။
အစိုးရနှင့် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရာ၌ သံသယများ ရှိနေသည်။ ထို့အပြင် အဖွဲ့တွင်း သဘောထားကွဲမှုများ ရှိနေသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသည် နှစ်ဖက်အလိုကျ အဖြေထွက်ပေါ်ရန် ခဲယဉ်းနေသည်။ သို့သော် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး
အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ယူစဉ်အတွင်း အောက်တိုဘာ(သို့မဟုတ်)နိုဝင်ဘာလသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်အများအပြား လာရောက်မည့် အချိန်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်၊ အီးယူအပါအ၀င် ဂျပန်၊ တရုတ်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ရုရှ၊ အိန္ဒိယ၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်များမှာ ထိုကာလအတွင်း နေပြည်တော်၌ ပြုလုပ်မည့် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲများသို့ လာရောက်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများ၊ ဂျာနယ်လစ်များကလည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ အဆက်မပြတ် ၀င်ရောက်နေမည် ဖြစ်သောကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့သတင်း စာမျက်နှာများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေများက ယခုနှစ်ထက်ပို၍ နေရာယူလာမည် ဖြစ်သည်။
အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်သည် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ၌ မြန်မာအစိုးရ၏ ပြည်ပဆက်ဆံမှု ပုံရိပ်ကို ဖော်ကျူးမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ကို မည်မျှအထိ လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဆိုခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းပုံရိပ်ကို ဖော်ကျူးခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အာဏာရပါတီဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် အဆိုပြုချက် အချက် ၇၃ ချက် အကြံပြုထားသည်။ အစိုးရအတိုက်အခံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီက အဆိုပြုချက် အချက် ၁၆၈ ချက်ရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်။ ထို့အတူ ကျန်အဖွဲ့ အသီးသီးက အဆိုပြုချက်များ တင်ပြကြမည်ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့အစည်း/လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီး တင်ပြလာသော အဆိုပြုချက်များကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီက ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပြီး လွှတ်တော်သို့ ဆက်လက်တင်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ တင်ပြချက်များကို အခြေခံပြီး ပူးပေါင်းကော်မတီက မည်ကဲ့သို့ သုံးသပ်မည်ဆိုခြင်းနှင့် လွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးပြီး မည်မျှအထိ ပြင်ဆင်နိုင်မည်ဆိုခြင်းမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ဝက်မတိုင်ခင်မှာပင် အဖြေထွက်လာနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေကို အခြေခံအဆုံးအဖြတ်ပေး ခြေလှမ်းများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အားလုံးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိကာ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် မျှော်မှန်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ နှစ်ကုန်ချိန်တွင် ထိုမျှော်မှန်းချက်မှာ ဖြစ်မလာခဲ့ချေ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၏ လိုင်ဇာဘုံသဘောတူညီချက် ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အစိုးရ၏ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ဆိုင်ရာ စာချုပ်မူကြမ်း ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ လိုင်ဇာ ဘုံသဘောတူညီချက်နှင့် အစိုးရ၏ မူလအပစ်ရပ် စာချုပ်မူကြမ်းမှာ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ကွဲလွဲခဲ့သည်။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုများအရ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ သဘောတူညီနိုင်ခဲ့ပြီဟု ဆိုကြပြန်သည်။ သို့သော် ကွဲလွဲမှုများက ဆက်ရှိနေသည်။
ကွဲလွဲချက်များကို ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ၌ အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ထပ်မံတွေ့ဆုံကြမည် ဖြစ်သည်။ တိကျသောအဖြေ ထွက်ပေါ်ရန် မရေရာသော အခြေအနေ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အစိုးရနှင့် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရာ၌ သံသယများ ရှိနေသည်။ ထို့အပြင် အဖွဲ့တွင်း သဘောထားကွဲမှုများ ရှိနေသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသည် နှစ်ဖက်အလိုကျ အဖြေထွက်ပေါ်ရန် ခဲယဉ်းနေသည်။ သို့သော် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်ထိတွေ့ တိုက်ပွဲဖြစ်မှုများလည်း ဆက်ရှိနေနိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာနက ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်မှ ဧပြီ ၂၀ ရက် ကာလအတွင်း ကောက်ယူမည်ဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော် ကာလအတွင်း ပထမဆုံး သန်းခေါင်စားရင်းကောက်ရန် အချိန်သုံးလခန့်သာ ကျန်တော့သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ မည်သို့လုပ်ဆောင်မည် ဆိုခြင်းမှာ စောင့်ကြည့်ရမည့် အခြေအနေ ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပြဿနာ ရှိနေသည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ပြဿနာ ရှိနေသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ပြဿနာ ရှိနေသည်။ ပြည်ပဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် ရောက်ရှိနေသူများကို မည်ကဲ့သို့ စာရင်းကောက်ယူမည်နည်း။
‘၀’ အထူးဒေသကဲ့သို့သော တိုင်းရင်းသားဒေသများ၌ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခြင်းကို လက်ခံခဲ့သည်။ သို့သော် အစိုးရ၀န်ထမ်းများကို လာရောက်ကောက်ယူခွင့် မပြုခဲ့ပေ။ ၎င်းတို့ ၀န်ထမ်းများဖြင့်သာ ကောက်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ၏ ထိန်းချုပ်နယ်မြေများ၌ ရှိနေသူများအား အစိုးရကိုယ်တိုင် သွားရောက်ကောက်ယူရန် အခက်အခဲ ရှိနေသည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဆရာ/ဆရာမဦးရေ ၁၂၀၀၀၀ ကျော်၏ အကူအညီဖြင့် ၁၂ ရက်အတွင်း အပြီးကောက်ယူရန် ရည်မှန်းထားသည်။ ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၈ သန်း ကုန်ကျမည်ဟု သိရသည်။
ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူနိုင်ရေးမှာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အခြေအနေနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ရာပြည့်ဖြစ်ရပ် များစွာရှိသည်။ ပထမကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ပွားမှု နှစ်တစ်ရာပြည့်သည်။ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ (သို့မဟုတ်) မြန်မာ့အလင်း စစ်ကြေးနန်းသတင်း စတင်ထုတ်ဝေခြင်း နှစ်တစ်ရာပြည့်သည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် အင်္ဂလိပ်သာသနာပြုအဖွဲ့ (The Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Party) က မျက်မမြင်ကျောင်း တည်ထောင်မှု နှစ်တစ်ရာပြည့်သည်။ ယင်းမာပင်-ကလော မီးရထားလမ်း စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း နှစ်တစ်ရာပြည့်သည်။ ဆမားဒူးဝါ ဆင်ဝါးနောင်၊ မောင်သုတ၊ အိုးဝေဦးညိုမြ၊ ဦးသိန်းဖေမြင့်၊ ဓမ္မိကဦးဘသန်းနှင့် စန်းသော်တာတို့ မွေးဖွားခဲ့ခြင်း နှစ်တစ်ရာပြည့်သည်။
နှစ်ကိုးဆယ်ပြည့်များမှာ ‘၀တ္ထု’ မဂ္ဂဇင်း ထွက်ရှိမှု၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၌ အကြီးအကျယ်ဆုံး နိုင်ငံရေး အစည်းအဝေး ဖြစ်ခဲ့သည့် ဂျီစီဘီအေ ပေါင်းတည်ကွန်ဖရင့်၊ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမကို ကြိုဆိုသော သံဃာတော်နှင့် လူထုအား ပုလိပ်များက ဖြိုခွင်းခဲ့ရာမှာ ဆရာတော် ဦးစန္ဒိမာ ပျံလွန်တော်မူခဲ့ခြင်းနှင့် လူပရိသတ်များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ခြင်း၊ ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အရှေ့တိုင်းပညာ ပါမောက္ခ ဖြစ်ခဲ့ခြင်း အစရှိသည်တို့ ဖြစ်သည်။
နှစ်ငါးဆယ် ပြည့်ခဲ့သည်များမှာ ကင်းထောက်အဖွဲ့ချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ခြင်း၊ အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ကာကွယ်သည့်ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ကာ နိုင်ငံရေးပါတီ အဖွဲ့အစည်းများကို ဦးနေ၀င်း (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး)က ဖျက်သိမ်းခဲ့ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်ပညာရေး ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းပြီး စနစ်သစ်ပညာရေး မူဝါဒချမှတ်ခြင်း၊ အင်းစိန်မီးရထား ဗဟိုသင်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အနေဖြင့် ဦးသန့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးစာပေများ မှတ်ပုံတင်လိုပါက ဗဟိုမှတ်ပုံတင် အဖွဲ့သို့ တင်ပြရန် ကြေညာခြင်း၊ ကြေးမုံ၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ဂါးဒီးယန်း သတင်းစာများကို ပြည်သူပိုင် သိမ်းခဲ့ခြင်း၊ ငွေကျပ်ငါးဆယ်တန်နှင့် ရာတန်များကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းခဲ့ခြင်း၊ တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း၊ ရဲအဖွဲ့ကြီးကို ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲခြင်း၊ တက္ကသိုလ် ပညာရပ် အားလုံးကို မြန်မာဘာသာဖြင့်သင်ရန် အခြေခံမူ ချခဲ့ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖြစ် မြေဧက ၆၀၀၀ နီးပါး သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး MEC ၏ ဖန်ချက်စက်ရုံနှင့် သွပ်ပြား၊ ဖိနပ်စက်ရုံများကို ချန်လှပ်မြေအဖြစ် ခွင့်ပြုခဲ့
သီလ၀ါစက်မှုဇုန် တစ်နေရာအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-မင်းသီဟဇော်)
သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖြစ် မြေဧက ၆၀၀၀ နီးပါးအား နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း ယင်းနယ်နိမိတ်အတွင်း မြန်မာစီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (MEC) ၏ ဖန်ချက်စက်ရုံ၊ သွပ်ပြားစက်ရုံ၊ ဖိနပ်စက်ရုံများကို ချန်လှပ်မြေအဖြစ် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်းကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့က အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်းက သတ်မှတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့သတ်မှတ်ရာတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် အတွင်းရှိ နယ်နိမိတ် တိုင်းတာပြီးစီးမှု အမှတ်ပေါင်း ၁၇၉ ခုဖြစ်သည့် နယ်မြေဧရိယာ စတုရန်း ကီလိုမီတာအားဖြင့် ၂၃ ဒသမ ၄၂၂၁ (ဧရိယာ အကျယ်အ၀န်းအားဖြင့် ၅၇၈၇ ဒသမ ၇၁၈ ဧက) ကို သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာစီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်းမှာ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစု တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည့် နယ်နိမိတ်အတွင်း (MEC) ၏ ဖန်ချက်စက်ရုံ၊ သွပ်ပြားစက်ရုံ၊ ဖိနပ်စက်ရုံများ အပါအ၀င် ဌာနဆိုင်ရာ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ရပ်ကွက်များနှင့် ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ အသုံးပြုထားသည့် အ၀န်းအ၀ိုင်းများ တည်ရှိရာ ၁၃၄၅ ဒသမ ၆၄၄ ဧကကို ချန်လှပ်ထားရမည်ဟု ထည့်သွင်းဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ချန်လှပ်ရာတွင် မြန်မာစီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ဖန်ချက်စက်ရုံနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ဓာတ်ဘူးစက်ရုံ၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ဓာတ်အားခွဲရုံ၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ စက်ရုံတည်ဆောက်ရန် လျာထားမြေ၊ မြန်မာစီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်း၏ သွပ်ပြားစက်ရုံနှင့် ဖိနပ်စက်ရုံ၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ထုပ်ပိုးစက်ရုံနှင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံများ၊ သီလ၀ါဆည်၊ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်၊ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်အဆောင်၊ အေးမြသီတာရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာယာရပ်ကွက်၊ ဖန်ချက်တောရကျောင်း၊ ဖလမ်းကန်ဦးကျောင်း၊ ဖလမ်းရွာဦး ဘုရားလေးကျောင်း၊ သီလ၀ါ ကုန်းတန်းတောရကျောင်း၊ ခရစ်ယာန်ရှိခိုးကျောင်း၊ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ ၂၀ ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းကို ပထမအဆင့် ဧရိယာနှင့် ဒုတိယအဆင့် ဧရိယာဟု ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားကာ ပထမအဆင့် ဧရိယာကို ပထမဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ပထမဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရခြင်းမှာ ယင်းဧရိယာသည် ရန်ကုန်မြို့နှင့် ပိုမိုနီးကပ်ခြင်း၊ မြေမှာလည်း တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ရှိခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရန် ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကြောင့် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ပထမအဆင့် စီမံကိန်း ဧရိယာအား ဂျပန်ကုမ္ပဏီများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် အကောင်အထည် ဖော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၄ နှစ်သစ် ကြိုဆိုခြင်းအား ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ညက ရန်ကုန်မြို့ရှိ လူစည်ကားရာ နေရာများတွင် ကျင်းပခဲ့
ရန်ကုန်မြို့ မိုင်ဒါကွင်းတွင် ၂၀၁၄ နှစ်သစ်အား ကြိုဆိုသည့် ဖျော်ဖြေပွဲတွင် အနုပညာရှင်များနှင့် ပရိသတ်များ ပါဝင်ဆင်နွှဲနေသည်ကို တွေ့ရစဉ်
၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်သစ်အား ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများဖြင့် ကြိုဆိုခြင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ညပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ရှိ လူစည်ကားသော နေရာများတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် အစည်ကားဆုံး နှစ်သစ်ကြိုဆိုခြင်းကို အခမဲ့ ၀င်ခွင့်ပေးခဲ့သည့် မိုင်ဒါကွင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တေးသံရှင်များစွာ၏ အခမဲ့ ဖျော်ဖြေမှုများစွာဖြင့် ပရိသတ်များ စည်ကားစွာဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ နှစ်သစ်ကို ပျော်ရွှင်မှု အပေါင်းဖြင့် ကြိုဆိုခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
အလားတူ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကြိုဆိုခြင်းကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ အင်းလျားကန်ဘောင်နှင့် မြကျွန်းသာ ကန်ဘောင်တို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးအင်အား တင်းကျပ်စွာဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုသူများဖြင့် စည်ကားခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
ထို့ပြင် တာမွေမြို့နယ် ရွှေထွဋ်တင်ကွင်း၌လည်း Grand Royal မှ ပရိသတ် အသိအမှတ်ပြုပြီးသား အဆိုတော် အဖွဲ့များဖြစ်သည့် Big Bag၊ Wanted၊ Idiots၊ Reason တို့နှင့် ဂျီလတ်၊ အေသင်ချိုဆွေ၊ ရတနာမိုင်၊ အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်နှင့် ပြည်ပဒီဂျေပညာရှင်များနှင့် အခြားအနုပညာရှင် များစွာတို့၏ ဖျော်ဖြေမှုများနှင့် ပရိသတ် မြောက်များစွာဖြင့် နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းတွင်လည်း ဟစ်ဟော့ပ် အနုပညာရှင်များဖြစ်သည့် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ လွှမ်းပိုင်၊ ရဲရင့်အောင်၊ ဘန်နီဖြိုး၊ ကျော်ထွဋ်ဆွေ၊ Snare၊ Bobby Soxer စသည့် အနုပညာရှင်များဖြင့် Hip Hop Beach Party ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဟစ်ဟော့ပ်ဝါသနာရှင် လူငယ်များဖြင့် နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အဆိုပါ ပွဲလမ်းသဘင်များဖြင့် နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုခြင်းများအပြင် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အသီးသီးရှိ လူငယ်များကလည်း ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၏ အလှဆုံးမိန်းမပျို Top 25 စာရင်းတွင် မိုးစက်ဝိုင်နှင့် ခင်ဝင့်ဝါ ပါဝင်
ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံက အလှမယ် နှစ်ဦးဖြစ်သည့် ခင်ဝင့်ဝါနှင့် မိုးစက်ဝိုင်တို့ The Beauties Concept ၏ ကမ္ဘာ့ အချောအလှဆုံး အလှမယ် Top 25 စာရင်းဝင်အဖြစ် ထပ်မံ ရွေးချယ်ခြင်း ခံရသည်။
ယင်းတို့သည်The Beauties Concept ၏ ၂၀၁၃ခုနှစ်၏ အလှဆုံးမိန်းမပျို (The Most Beautiful Girl 2013) ၏ Top(100) စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ယခု အကြိမ်တွင် ထပ်မံရွေးချယ်ရာတွင် ၂၅ယောက်ဆန်ခါ တင်စာရင်းတွင် ပါဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မိုးစက်ဝိုင်သည် Miss Universe 2013 ကို မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အဖြစ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ခင်ဝင့်ဝါ သည် Miss Supranational 2013 ကို မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အဖြစ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူများ ဖြစ်သည်။
ယင်းအပြင်ခင်ဝင့်ဝါသည်The Ideal Beauty Website က ပြုလုပ်သည့် Most Beautiful Queen of 2013 Top (80) မှ Top 30 ထပ်မံ ရွေးချယ်ရာတွင် လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး The Most Beautiful Woman ရွေးချယ်မှုတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
ခင်ဝင့်ဝါသည် ကြော်ငြာများ၊ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများကို လက်ခံ ရိုက်ကူးနေပြီး လက်ရှိတွင် ပရဟိတ အလှူ အဖြစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ရက်က သုခရိပ်မြုံ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတဂေဟာသို့ စားစရာများကို သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နှစ်သစ်ကူးတွင် ပထမဆုံး မီးလောင်မှု တောင်ကြီး ကန်အောက်ရပ်ကွက်တွင် ဖြစ်ပွား
တောင်ကြီး၊မဇ္ဈိမ ။ ။ တောင်ကြီးမြို့ ကန်အောက်ရပ်ကွက်၊ ခတ္တာလမ်း၊ နယ်မြေ(၁)ရှိ နမ်းခေးမောဝ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်၏ ဂိုဒေါင်တွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုတစ်ခု နှစ်သစ်ကူးစအချိန် ၂၀၁၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ရက် နံနက် ၁နာရီခွဲခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည့် ဂိုဒေါင်သည် သွပ်မိုးပျဉ်ကာ ဂိုဒေါင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂိုဒေါင်တွင်း၌ တပ်ဆင်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများ
ဟောင်းနွမ်းပေါက်ပြဲနေသဖြင့် လျှော့ဖြစ်ရာမှု မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု တောင်ကြီးမြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
မီးလောင်ကျွမ်းသည့်နေရာသို့ တောင်ကြီးမြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာန၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့များနှင့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ ဝိုင်းဝန်းကာ မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ပြီး နံနက် ၂နာရီ ၁၀မိနစ်ခန့်တွင် မီးငြိမ်းခဲ့သည်။
"ကျွန်တော်တို့ အိပ်ပျော်နေတာ၊ မီးတောက်တွေ ထွက်လာမှ သံချောင်းတွေခေါက်ပြီး တစ်ရပ်ကွက်လုံး နိုးကုန်တယ်၊ လူအင်အား များတာရယ်၊ လမ်းကလည်း သာတာရယ်ကြောင့် လူဦးလို့ မီးငြှိမ်းသတ်နိုင်တာ"ဟု ခတ္တာလမ်းနေသူ ကိုအယ်သားက မဇ္ဈိမကို
မီးလောင်ရာနေရာသို့ မီးသတ်ဦးစီးဌာန မှ မီးသတ်ယာဉ် ၆စီး ၊ အေးသာယာ မီးသတ်ဌာနမှ မီးသတ်ကား ၁စီး ၊ ရွှေညောင် မီးသတ်ဌာနမှ မီးသတ်ကား ၁စီး၊ စည်ပင်မှ ရေယာဉ် ၂စီး ပုဂ္ဂလိက ရေယာဉ် ၃စီး၊ ထော်လဂျီ ရေကား ၅စီးတို့ဖြင့် ဝိုင်းဝန်းငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးမှာ ငွေကျပ် သိန်း၃၀ခန့်ရှိသည်ဟု လတ်တလောတွက်ချက်မှုအရ ခန့်မှန်းထားကြောင်း မီးသတ်ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ဂိုဒေါင်ပိုင်ရှင်အား တောင်ကြီးမြို့မ ရဲစခန်းက (ပ)၈/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၂၈၅အရ အမှုဖွင့် အရေးယူ
အာဆီယံခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံမည့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ် ရွေးချယ်မှု အစိုးရ လွှမ်းမိုးမှု မရှိစေရ
ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ ။ ။ အာဆီယံ ထိပ်သီးညီလာခံ ကျင်းပနေစဉ် ကာလအတွင်း အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ရာ ထိုသို့ရွေးချယ်မှုတွင် အစိုးရ၏ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုကို လက်ခံမည် မဟုတ်ဟု အာဆီယံပြည်သူ့ဖိုရမ် ဖြစ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်လင်းဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဦးကျော်လင်းဦးက "တကယ့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မယ့် အများသဘောတူတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပဲ
ရွေးချယ်စေမှာပါ" ဟု ဆိုသည်။
ယင်းကိုယ်စားလှယ်ကို မတ်လအတွင်း ကျင်းပမည့် အာဆီယံ ပြည်သူ့ဖိုရမ် နောက်ဆုံးရက်၌ နိုင်ငံအလိုက် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ် ကာ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးစီကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အများသဘောတူ အတည်ပြု
ယင်းတွေ့ဆုံပွဲသို့ ကိုယ်စားပြု တက်ရောက်သူသည် အာဆီယံပြည်သူ့ဖိုရမ်ကျင်းပရာမှ ရရှိလာသည့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်နှင့်
ကြေညာချက်များကို အာဆီယံ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များအား အသိပေး ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်သည်။
အာဆီယံ ပြည်သူ့ဖိုရမ် ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် မြန်မာပြည် ကိုယ်စားလှယ် ဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်က "မျက်နှာချင်းဆိုင်
တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာ အားလုံးသဘောတူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲ ရွေးချယ်ကြတာပါ။ (အာဆီယံ ပြည်သူ့ဖိုရမ် ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ) ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် တွေကိုလည်း ရွေးချယ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တွေက အဆိုပြုတဲ့သူပေါ့”ဟု ပြောသည်။
အာဆီယံ ပြည်သူ့ဖိုရမ် ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ရန်ပုံငွေ စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၄၅၀၀၀ ဖြစ်သည်။
အာဆီယံ လူထုဖိုရမ်သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစကာ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်တာဝန်ယူရသောနိုင်ငံများရှိ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ဦးဆောင် လက်ခံကျင်းပကြပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများရှိ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများမှ ပါဝင်ဆွေးနွေးကာ ဆွေးနွေးပွဲရလာဒ်များကို အာဆီယံနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကျင်းပချိန်တွင် ပေးပို့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အာဆီယံ ပြည်သူ့ဖိုရမ် ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် ပြည်တွင်း အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်သော မြန်မာလူထုဖိုရမ်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ရက်မှ ၃၀ ရက် အထိ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာကွန်ဗန်းရှင်းစင်တာတွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်း ၁၆၅ ဖွဲ့မှ လူဦးရေ ၆၅၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
သံတွဲတွင် ညမထွက်ရအမိန့် သုံးနာရီလျှော့ချ
ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ ။ ။ အောက်တိုဘာလအတွင်းက လူမျိုးစုနှစ်ခု ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သံတွဲမြို့တွင် ညမထွက်ရအမိန့် သုံးနာရီ လျှော့ချလိုက်ပြီဖြစ်သည်ဟု သံတွဲခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးထွန်းဝေက ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် မဇ္ဈိမ ကိုပြောသည်။
ယခင်က ည ၆ နာရီမှ မနက် ၆ နာရီအတွင်း သွားလာခွင့်မပြုဘဲ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားရာမှ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် နံနက် ၄ နာရီမှ ည ၇ နာရီထိ သုံးနာရီလျော့ချ လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးများ ဆက်လက်ထားရှိဦးမည် ဖြစ်သည်။
“ဒေသတွင်း အခြေအနေက တော်တော်လေး တည်ငြိမ်လာပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရပ်မိရပ်ဖတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး လျှော့ချပေးတာပါ။ အခြေအနေ ဆက်လက်တည်ငြိမ်နေမယ်ဆိုရင် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ရုပ်သိမ်းသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်” ဟု ဦးထွန်းဝေက မဇ္ဈိမ ကိုပြောသည်။
ထိုသို့ လျော့ချရေးအတွက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဆောင်သော မြို့နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီနှင့် မြို့မိမြို့ဖများအဖွဲ့များ တိုင်ပင်ကာ ပြည်နယ်အစိုးရကို တင်ပြပြီး ပြည်နယ်အစိုးရ အတည်ပြုချက်ဖြင့် လျှော့ချပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ညမထွက်ရအမိန့် လျော့ချခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သံတွဲမြို့ ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးထွန်းမြင့်က "မနက်လေးနာရီ ကတော့ ဒီဘက်ဒေသက ဈေးရောင်းဈေးဝယ်တွေ စောစောသွားလာရတဲ့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်၊ ည ကျတော့ သိပ်မထူးပါဘူး။ ၉ နရီလောက်ထိ လျှော့ပေးနိုင်ရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့”ဟု ပြောသည်။
သံတွဲမြို့တွင် ဇွန်လ အတွင်းက အမြင်မတူသော လူအုပ်စုနှစ်ခုကြား ပထမအကြိမ် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပြီး ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှ ဒေသ တည်ငြိမ်မှုကြောင့် ယခုကဲ့သို့ လျော့ချပေးပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အောက်တိုဘာလအတွင်းက ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ပုဒ်မ ၁၄၄ ကို ထပ်မံတိုးမြင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုထပ်မံလျော့ချခြင်း ဖြစ်သည်။
သံတွဲပဋိပက္ခတွင် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ရသော အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၁၁၂)စုနှင့် လူဦး ရေ(၄၈၇)ဦး၊ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ သုံးလုံးနှင့် ဆီဂိုဒေါင်တစ်လုံးရှိပြီး အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
Written by ကေဇူး
ရပ်ရွာအောက်ခြေအဆင့်ကနေ မြှင့်တင်ပြောင်းလဲရမယ့် မြန်မာ့ဘောလုံးဖွံ့ဖြိုးရေး
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာ ယူ ၂၃ အသင်းရဲ့ သမိုင်းဝင်ကျရှုံးမှုနဲ့အတူ မြန်မာ့ဘောလုံးလောက ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေး၊ ရှင်းလင်းသန့်စင်ရေးအသံတွေ မီဒီယာစာမျက်နှာ နဲ့ လူမှုကွန်ရက်တွေမှာသောသောညံအောင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းတွေ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ အခါ မအောင်မမြင်ဖြစ်လာတဲ့အခါတိုင်း မြန်မာ့ဘောလုံးလောကရဲ့ တစ်ပွဲတိုးအစီအမံနဲ့ ရေတိုကုထုံး တွေကို ပြောခဲ့ရေးခဲ့ပေမယ့် ထိရောက်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်အသင်းတွေ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမှာ အောင်မြင်မှုရဖို့ ရုန်းကန်နေခဲ့ရပြီး ဘောလုံးအဆင့် အတန်းက တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာနေတာကို လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ဘောလုံးလောက ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ကို ကျင်းပနိုင် ခဲ့ပေမယ့် ရေရာသေချာတဲ့ အနေအထားတစ်ခုကို ရောက်မလာသေးဘဲ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ် တည်နိုင်ဖို့တောင် မနည်းရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက် ဘောလုံးဖွံ့ဖြိုးရေးမှာ ပင်မလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ လူငယ် စီမံကိန်းတွေတောင် အားစိုက်မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒီအခြေအနေမှာ မြန်မာ့ဘောလုံးလောက တိုးတက် ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (MFF) တစ်ခုတည်းအပေါ်မှာ ပုံကျလာပါတယ်။ ဒီလိုသာ မြန်မာ့ဘော လုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် တစ်ခုတည်းသာ ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုရင် အနောက်အရပ်က နေထွက်ရင်တောင် အောင်မြင်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ တချို့အပိုင်းတွေမှာတော့ တိုးတက်မှုရှိတဲ့အရိပ်လက္ခဏာတွေရှိလာတာလည်း မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလအတွင်းက အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (AFC) ကပေးအပ်တဲ့ လူမှုထူးချွန်ဆု (Asia Dream Award) ကို အာရှဘောလုံး အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကိုကျော်ပြီး ရရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ယနေ့ ခေတ် အားကစားဟာ အားကစားသက်သက်မျှသာ မဟုတ်တော့ဘဲ မိမိနေထိုင်ရာရပ်ရွာလူထုကို အ ကောင်းဆုံး ပေးဆပ်နိုင်ဖို့ အယူအဆသစ်တွေ ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးသူငယ်နဲ့ မိန်းကလေးများ လုံခြုံဘေးကင်းရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးစတဲ့ ကဏ္ဍတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာ တာကို တွေ့မြင်လာရပါတယ်။ ဒါဟာ အားကစားကဏ္ဍကနေ လူထုအတွက် ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပေးလာ တဲ့ လူမှုရေးတာဝန်ယူမှု (Social Responsibilites) တစ်ရပ်ပါပဲ။
ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ၁၉၇၂ ခုနှစ် မြူးနစ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ အသန့်ရှင်းဆုံး (Fair Play Award) ဆုကို ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်အကြာမှာ ပြန်လည်ရရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (FIFA) ကပေးအပ်တဲ့ ဂိုးပရောဂျက်အစီအစဉ် တွေကို အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တဲ့အတွက် ထပ်မံပေးအပ်တဲ့ FIFA 11 for Health အစီအစဉ်ကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ဟာ အာရှတိုက်နိုင်ငံတွေထဲမှာ ပထမဆုံးရရှိတဲ့အဖွဲ့ အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချူပ်က မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ဖီဖာကျန်းမာရေးအတွက် ၁၁ ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာ ကလေးသူငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေး၊ မူးယစ် ဆေးဝါး၊ လိင်အပျော်အပါးနဲ့ အရက်သေစာသုံးစွဲမှုကနေ ကာကွယ်တားဆီးရေး၊ HIV၊ AIDS ကာကွယ် ရေး၊ အမျိုးသမီးများကို အကာအကွယ်ပေးရေး၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု၊ ရေကောင်းရေသန့် ရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာစွာ ပြုမှုနေထိုင်တတ်ရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်မှု အလေ့အထကောင်းနဲ့ မိသားစုဘ၀တန် ဖိုး၊ သန့်ရှင်းမျှတစွာ ဘောလုံးကစားတတ်ရေးစတဲ့ ကဏ္ဍတွေမှာ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအစီအစဉ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံလို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်ခုအတွက် ဘောလုံးအားကစားကနေရရှိ လိုက်တဲ့ အကျိုးအမြတ်တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီအစီအစဉ်တွေဟာ လူမြင်ကောင်းရုံ၊ ကြည့်ကောင်းရုံသက်သက်ဆိုရင်တော့ လှုမှုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နံတစ်လျားမှာ အာဟာရမပြည့်ဝဘဲ ရှင်သန်နေရတဲ့ ကလေး တွေ၊ ပညာသင်ကြားခွင့်မရတဲ့ ကလေးတွေ၊ ဘောလုံးအားကစားကို ၀ါသနာပါပေမယ့် ကစားခွင့်မရတဲ့ ကလေးတွေ၊ ကြက်တူရွေးပညာရေးစနစ်အောက်မှာ ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင် သင်ခန်းစာတွေကို အာဂုံ ဆောင်နေရတဲ့ ကျောင်းသားက လေးငယ်တွေ အများအပြားရှိနေပါတယ်။ ဒါပြင် ရပ်ကွက်မြို့နယ်နဲ့ အခြေခံပညာသင် ကျောင်းတွေမှာ စုံးစုံးမြုပ်နေတဲ့ အားကစားကွင်းတွေ၊ ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေး အတွက် တောင် နည်းပြကောင်းမရှိတဲ့ အခြေအနေတွေက မြန်မာ့ဘောလုံးလောကနဲ့ မြန်မာ့အားကစားအတွက် ကြီးမားတဲ့ အဟန့်အတားတစ်ခု ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ဒီလို မြားမြောင်လှတဲ့ အခက်အခဲတွေကို မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုတည်းရဲ့အားနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ ဆိုရင် အလှမ်းဝေးတဲ့ခရီးတစ်ခု ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေ၊ လူမှုပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်မှသာ ပိုမိုထိရောက်အောင်မြင်နိုင်မှာပါ။ ဒါ့ အပြင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အကျိုးအမြတ်မယူတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ၀ိုင်းဝန်းကူညီနိုင်မယ်ဆို ရင် ခရီးတွင်ကျယ်နိုင်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလဆန်း ၆ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့အချုပ်ရဲ့ အခက်အခဲ၊ ဘောလုံးအားက စား ၀ါသနာရှင်လူငယ်တွေအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ ဖော်ဆောင်ပေးမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုကို ကြား သိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို ထိုစဉ်ကတည်းကရေးဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကြောင့်မရေး ဖြစ်ခဲ့ဘဲ ယခုမှရေးဖြစ်တာကို ၀န်ခံရမှာပါ။ အချိန်အနည်းငယ် ကြာမြင့်သွားပေမယ့် ရေးသင့်တဲ့ အ ကြောင်းအရာတစ်ခုအဖြစ် ယူဆမိတာကြောင့် ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
မြန်မာ့ဘောလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခု က အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ဗြိတိသျှကောင်ဆယ်တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်တဲ့ ပရီးမီးယား ကျွမ်းကျင်မှုများ (Premier Skills) အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲဟာ မြန်မာ ဘောလုံးပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိတဲ့ လိဂ်တစ်ခုပါ။ ထို့အတူ မြန်မာလူကြီးလူငယ်တွေလည်း ဘောလုံးအားကစားကို ခုံမင်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ဘောလုံးအားကစားနဲ့ မိမိနေထိုင်ရာရပ်ရွာ အပေါ်၊ လူထုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုတဲ့ လူငယ်တွေအတွက်အခွင့်အရေးကောင်း တစ်ခုအဖြစ် မိတ်ဆက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ဘောလုံးအားကစားကို လူထုလှုပ်ရှားမှုအသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ ရပ်ရွာအကျိုး ပြုလုပ်ငန်းတွေကို ဆောင် ရွက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ပရီးမီးယားကျွမ်းကျင်မှု အစီအစဉ်ဟာ ဘောလုံး ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာအရေးပါတဲ့ နည်းပြ (Coach) နဲ့ ဒိုင်လူကြီးကောင်းတွေ (Referee) ထွက်ပေါ်လာဖို့ မြေ တောင်မြှောက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ပါ။ ဒီအစီအစဉ်ကို ရပ်ကွက်နဲ့ ကျေးရွာအောက်ခြေအဆင့် လူထု အတွင်းမှာ အဓိကထားဆောင်ရွက်မယ့် အစီအစဉ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဘောလုံး အားကစားနဲ့ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုဖို့နဲ့ဝေမျှဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေး၊ လှုမှုရေး မသန်မစွမ်းမှု၊ ကျား/မ အခန်းကဏ္ဍ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အလေ့အထကောင်းတွေရရှိဖို့ စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပရီးမီးယားကျွမ်းကျင်မှုများ (Premier Skills) အစီအစဉ်ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း ၂၇ နိုင်ငံမှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ခုနှစ် အစီအစဉ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် နိုင်ငံရှစ်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ဖို့ လျာထားထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင် လိုသူဟာ ဘောလုံးအားကစားကဏ္ဍကနေ မိမိနေထိုင်ရာ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းကို တိုးတက်အောင်ပြု လုပ်ပေးလိုတဲ့ စိတ်အားထက်သန်သူမည်သူမဆို ပါဝင်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်ကို နည်းပြ အတွက် အဆင့်သုံးဆင့်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားပြီး ဒိုင်လူကြီးအတွက် အဆင့် (၂) သတ်မှတ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
နည်းပြသင်တန်းအတွက် ပထမအဆင့်မှာ သင်တန်းသား ၄၈ ဦးကို ခုနစ်ရက် ပို့ချပေးမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ အဆင့်အပြီးမှာ ဘယ်လောက်အထိ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်၊ စိတ်အားထက်သန်မှု ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကဲ ဖြတ် သုံးသပ်ချက်အရ သင်တန်းသား ၃၆ ဦးကို ပြန်လည်ရွေးထုတ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဆင့် (၂) မှာ တော့ ဘောလုံးနည်းပြတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အားကြိုးမာန်တက် စွမ်းဆောင်နိုင်မယ် ဆိုရင် သင်တန်းငါးရက်ပြီးဆုံးချိန်မှာ သင်တန်းသားနှစ်ဦးဟာ တတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့် ကို တက်ရောက်သင်ယူခွင့်ရမှာပါ။
တတိယအဆင့်မှာ သင်တန်းသားနှစ်ဦးဟာ သင်တန်းချိန် ၁၂ ရက်ကို ဆက်လက်တက်ရောက်ရမှာပါ။ အဲဒီအဆင့်မှာတော့ ရွေးချယ်ခံသင်တန်းသားနှစ်ဦးဟာ အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်က နည်းပြနှစ်ဦးနဲ့ နည်းပြပညာရပ်တွေ လက်ထပ်သင်ယူခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့ အဆင့် တိုင်းမှာ ရပ်ရွာလူထုကို အစွမ်းကုန်မြှင့်တင်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပြသင်တန်း ပြီးဆုံး သွားချိန်မှာ တတ်ကျွမ်းထားတဲ့ပညာကို ပြန်လည် ဖြန့်ဝေပေးရမှာဖြစ်သလို ဘ၀အတွက် အာမခံချက် ရရှိစေမယ့် အလုပ်အကိုင်တစ်ခုလည်း ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့ဘောလုံး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထူးသင့်လျော်တဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ကြိုဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်မှာ ဘောလုံးအားကစားအတွက် နည်းပြနဲ့ဒိုင်လူကြီးအတွက်သာမကဘဲ နိုင်ငံတကာသုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားကိုပါ သင်ကြားပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ အရေးအဖတ်၊အပြော စွမ်းရည်တိုးတက်ဖို့နဲ့ ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝဖို့အတွက်ပါ စီစဉ်ထားတဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုလည်း ကျွဲကူးရေပါ တတ်ကျွမ်းခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘောလုံးကစားနည်းကို တီထွင်ခဲ့တဲ့သူတွေ ဟာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ယနေ့တိုင် ဘောလုံးအားကစားနည်းမှာ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ၊ အခေါ်အဝေါ်တွေ ထင်ရှားရှိပါတယ်။
ရပ်ရွာအောက်ခြေအဆင့်ကနေ မြှင့်တင်ပြောင်းလဲရမယ့် မြန်မာ့ဘောလုံးဖွံ့ဖြိုးရေး ...မှ အဆက်
တခြားသော ဘာသာစကားနဲ့ဖလှယ်အသုံးပြုကောင်းပြုကြပေမယ့် မူလအခေါ်အဝေါ်ကတော့ ယနေ့ထိ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ တတ်ကျွမ်းနားလည်မှု၊ ရေချိန်မြင့်မားမှုအလျောက် ကျယ်ဝန်းလှ တဲ့ ဘောလုံးအားကစားနည်းကို လေ့လာလိုက်စားရာမှာ အင်မတန်အသုံးဝင်တဲ့ လက်နက်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် လက်အောက်မှာ AFC အသိအမှတ်ပြု (A) လိုင်စင်ရနည်းပြ ၁၅ ဦး၊ B လိုင်စင်ရနည်းပြ ၅၆ ဦး၊ C လိုင်စင်ရနည်းပြ ၂၉၂ ဦး ရှိနေပြီး A လိုင်စင်ရနည်းပြထဲမှာတောင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာတတ်ကျွမ်းမှုက သုံးဦးသာရှိတယ်လို့ နည်းစနစ်ဒါရိုက်တာ ဦးဝင်းသူမိုးပြောစကားအရ သိရပါတယ်။
ဒါ့ပြင် အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ နည်းစနစ်ပိုင်း သင်တန်းပို့ချသူလည်းဖြစ်၊ ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်နဲ့ ကမ္ဘောဇအသင်းတို့ရဲ့ နည်းပြဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံသား ဆီဗာဂျီကလည်း မြန်မာနည်းပြ တွေအနေနဲ့ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဘောလုံးနည်းစနစ်တွေ၊ ပညာရပ်တွေတစ်ဆင့်တက်ကြိုးပမ်းလိုရင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ တတ်ကျွမ်းမှုကို ယခုထက် ပိုမိုလေ့လာဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ဖူးတာကို ဖတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွံ့ဖြိုးရေးမှာ နည်းပြနဲ့ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍအပြင် ဘာသာစကား တတ်ကျွမ်းမှုဟာလည်း အင်မတန်အရေးကြီးတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပြင် ပရီးမီးယားကျွမ်းကျင်မှုများ အစီအစဉ်မှာ ဒိုင်လူကြီးလုပ်လိုသူ လူငယ်တွေအတွက်လည်း လမ်းဖွင့် ပေးထားတာကြောင့် ရပ်ရွာအတွင်းက ဘောလုံးဝါသနာရှင် လူငယ်တွေဟာ ဘောလုံးဥပဒေတွေ၊ စည်း မျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီ ဘောလုံးကစားတတ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘောလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မှာ အခြေခံအကျဆုံးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးအချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘောလုံးအားကစားနည်းနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ မျိုးဆက်ပြတ်လပ်မှု ဒဏ်ကိုခံနေရဆဲ မြန်မာ့ဘောလုံးလောကအတွက် ဒီအစီအစဉ် ကြောင့် ဘောလုံးအခြေခံသဘောတရားတွေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီ ကစားတတ်တဲ့ မျိုးဆက် သစ်လူငယ်တွေ ထွက်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ပါဘူး။
ဆိုရရင် မြန်မာဘောလုံးလောကကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရာမှာ နေရှင်နယ်လိဂ်တစ်ခုတည်းနဲ့ သွားလို့မရ တော့ဘူးဆိုတာ ဆီးဂီမ်းပြိုင်ပွဲက သင်ခန်းစာပေးခဲ့ပြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အတူ အောက်ခြေလူထု လှုပ်ရှားမှု အသွင်နဲ့ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာ့ဘောလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလို့ ပြောမယ်ဆိုရင် လူငယ် စီမံကိန်းတွေ၊ အားကစားကွင်း အဆောက်အအုံတွေ၊ နည်းစနစ်တွေ၊ နည်းပြနဲ့ ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ အရည် အသွေးပိုင်းပါ တိုးတက်မှုရှိမှ မြန်မာ့ဘောလုံးဖွံ့ဖြိုးမှုရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါ တယ်။
Written by ဟိန်းထက်အောင်
Trade News - December 2013
Tech Space Journal - Vol2Issue 40 (4-Jan-2014)
၁.၁.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၇၀၀ အချိန်တွင် ရွှေပြည်သာမြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အင်းစိန်မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွါးခဲ့ကာ ဒဏ်ရာများရရှိထားသည့် လူနာတစ်ဦး ရောက်ရှိသေဆုံးသွားကြောင်းသတင်းအရ သွားရောက် စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ (၅/၂)ရပ်ကွက်နေ
အောင်မြတ်ကျော်(ခ)အောင်ကောင်းမြတ်(ဘ)ဦးစံတင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် ၀မ်းဗိုက်ယာဘက်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ(၃)ချက်၊ ၀မ်းဗိုက်ချက်အနီး ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ(၁)ချက်တို့ဖြင့်သေဆုံးနေသည်ကို စစ်ဆေး
ဖြစ်စဉ်အားစုံစမ်းရာ ၁.၁.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၂၀၀ အချိန်ခန့်တွင်
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းနှင့်
ပြည်တော်သာပတ်လမ်းဆုံတွင် ရဲကျော်ပါ(၈)ဦး(စုံစမ်းဆဲ)အဖွဲ့မှ ဂစ်တာတီး သီချင်းဆိုနေကြချိန် သေဆုံးသူပါ(၃)ဦးနှင့် စကားများပြီး
အပြန်အလှန်ထိုးကြိတ်ကာ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွါးကြစဉ် ရဲကျော်ပါ(၈)ဦးမှ အရက်ပုလင်းဖြင့်ရိုက်နှက်ပြီး ပုလင်းကွဲဖြင့်ထိုးခဲ့သောကြောင့်
သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ရွှေပြည်သာမြို့မရဲစခန်း
(ပ) ၄/၂၀၁၄၊ ပုဒ်မ ၃၀၂/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ကာ ရဲကျော်ပါ(၈)ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Mobile Money လုံခြုံရေးအတွက် Hacker များနှင့် စမ်းသပ်ထားသည်ဟုဆို
ယခုလ ၁၈ ရက်နေ့၌ စတင်အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သည့် Myanmar Mobile Money ဝန်ဆောင်မှုသည် လုံခြုံရေးအရ စိတ်ချရသည့်အပြင် ကြိုတင်စမ်းသပ်မှုများအဖြစ် Haker များ အပါအဝင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “ဒီ Platform က ကမ္ဘာမှာ Mobile Money ကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ ၃ ခုထဲက တစ်ခုကိုသုံးထားတာ။ နည်းပညာကလည်း အမေရိကန် ပြင်သစ်နည်းပညာတွေပါ။ Mobile Money ဆိုပေမယ့်လည်း အင်တာနက်စနစ် တစ်ခုတည်းကိုပဲ အခြေခံထားတာမဟုတ်ဘူး” Myanmar Mobile Money ဝန်ဆောင်မှု၏ CEO ဖြစ်သူ ကိုကျော်ထူးလင်းက ပြောသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် ငွေကြေးများ မှားယွင်းပို့မိသည့်အခါလည်း Call Center 1212 သို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်ဆုံးရှုံးမှု မရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Mobile Money သည် နည်းပညာအရ လုံခြုံစိတ်ချရသည်သာမက ငွေကြေးအနေဖြင့်လည်း ဗဟို ဘဏ်၏ လက်အောက်၌ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည့်အတွက် စိတ်ချယုံကြည်ရကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါစနစ်သည် လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိရန်အတွက် ငွေကြေးများလွှဲပြောင်းသည်ကိုသာ ပုံမှန်အားဖြင့် လွှဲပြောင်းနိုင်သော်လည်း ငွေကြေးထုတ်ယူသည့်အခါ Register ပြုလုပ်ပြီးမှသာ Agent များထံ၌ ထုတ်ယူနိုင်မည်ဟုသိရပြီး အသုံးပြုသူများ၏အခက်အခဲနှင့် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်အတွက် mpay.myanmar mobilemoney.com ကို Portal အဖြစ် လွှင့်တင်ထားကြောင်း သိရသည်။ Myanmar Mobile Money ဝန်ဆောင်မှုကို ၃ လကျော် အကြာကတည်းက လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကြိုတင်စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပေးချေမှုများနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းခြင်းများကို ယုံကြည်စွာ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းက ပြောဆိုထားသည်။ မြင့်ကျော်လှိုင်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုကို ရိုးရာဓလေ့ဖြင့် ဖြေရှင်းမှုကြောင့် ကယား အမျိုးသမီးများ နစ်နာ
ကယားပြည်နယ် ဒေသတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် ခံရမှုများအတွက် ရိုးရာဓလေ့နည်းဖြင့် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းမှုသည် ကာယကံရှင် အမျိုးသမီးတို့၏ အခွင့်အရေး နစ်နာဆုံးရှုံးလျက် ရှိကြောင်း ကယန်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မူအန်းဂျေလာ ကပြောကြားသည်။
“မိန်းကလေးတစ်ဦးကို အဓမ္မ ပြုကျင့်ပြီးရင် ဝက်တစ်ကောင်သတ်၊ တစ်အိမ် တစ်ပိဿာ ဝေရုံနဲ့ ပြီးနေတာ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးက ဝက်တစ်ကောင်ဖိုးပဲ ရှိသလို ဖြစ်နေတယ်။ ကာယကံရှင်တွေအတွက် နစ်နာတယ်” ဟု ဒေါ်မူအန်းဂျေလာက ဆိုသည်။
အကြမ်းဖက်ခံရသည့် အမျိုးသမီးတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများအတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုရရန် လိုအပ်လျက် ရှိကြောင်း၊ ၎င်းတို့ အဖွဲ့အနေနှင့် အသိပညာပေးခြင်းသာ လုပ်ပေးနိုင်ကြောင်း၊ အမျိုးသမီးများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများအတွက် ဥပဒေအရ ဖြေရှင်းတရားစွဲဆိုရန် ငွေကြေး အခက်အခဲများ ရှိသဖြင့် အခမဲ့ရှေ့နေ ဝန်ဆောင်မှု လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ၎င်းကပြောကြားသည်။
ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ပထမပတ်အတွင်း လွိုင်ကော်-တောင်ငူ ကားလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည့် ကျေးရွာတစ်ခုတွင် အသက်၂၂ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးကို အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တရားဥပဒေအရ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခြင်း မပြုဘဲ ရွာနာမည် ပျက်မည်ဆိုသည့် ဖိအားပေးမှုဖြင့် ကြက်တစ်ကောင် သတ်၍ ကျေအေးခဲ့ကြောင်း ကယန်း အမျိုးသမီး အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
တိုင်းရင်းသားများတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဓလေ့ထုံးတမ်း ရှိပြီး ခေတ်နှင့်မညီသော ဓလေ့ထုံးတမ်းများလည်း ရှိနိုင်၍ ထိုဓလေ့များကို အသိပညာပေးပြီး ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည့်အပြင် ရွာဓလေ့အတိုင်း ဝက်တစ်ကောင်နှင့် ကျေအေးပေးခြင်းသည် တရားဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်း ထိုက်သည့် ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ် ဥပဒေကို ထိခိုက်နိုင်စရာ ရှိကြောင်း ကယားပြည်နယ် တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးငိုဆင်ပ်က ပြောကြားသည်။
“ပြစ်မှုကျူးလွန်သူရော နောက်ထပ် ကျူးလွန်မယ့်သူရော ထပ်မကျူးလွန်ရဲအောင် ဟန့်တားရာ မရောက်ဘဲနဲ့ အခွင့်အလမ်း တစ်ခုပေးရာ ရောက်တယ်။ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ ဒီလို ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့လူက မကြောက်တော့ဘဲနဲ့ အခါခါ အထပ်ထပ် ကျူးလွန်မယ်ဆိုရင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုကို ထိခိုက်ရာ ရောက်တယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ကယားပြည်နယ်အတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဓမ္မပြုကျင့် ခံရသူ အမျိုးသမီး အများစုသည် အသက် ၉ နှစ်အောက် မှ ၂၂ နှစ်အကြား ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကယန်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့က ဆိုသည်။
စစ်တွေမြို့နယ်တွင် တာဝန်ကျ ရဲတပ်သားနှစ်ဦးအား ဘင်္ဂါလီရှစ်ဦးက ရိုက်နှက်သဖြင့် တစ်ဦးသေဆုံး
တာဝန်ကျ ရဲတပ်သားနှစ်ဦးအား ဘင်္ဂါလီရှစ်ဦးက ရိုက်နှက်သဖြင့် တစ်ဦးသေဆုံးပြီး တစ်ဦးမှာ ဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသမှု ခံနေရကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ်က စစ်တွေမြို့နယ် မှန်စီရဲကင်းတွင် တာဝန်ကျနေသော တပ်သားသန့်ဇင်ဝင်းနှင့် တပ်သားကျော်ကျော်မိုးတို့သည် လှည့်ကင်းဆောင်ရွက်နေစဉ် ရဲကင်းနောက်ဘက် သုံးဖာလုံအကွာရှိ တရုတ်သင်္ချိုင်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ရာ အုတ်ဂူများ ဖျက်ဆီးနေသော ဘင်္ဂါလီရှစ်ဦးအား တွေ့ရှိသဖြင့် တားမြစ်ရာမှ သံတူးရွင်းများဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ရိုက်နှက်မှုကြောင့် တပ်သားသန့်ဇင်ဝင်းတွင် ဦးခေါင်းယာဘက်ချိုစောင်း ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ နှစ်ချက်၊ တပ်သားကျော်ကျော်မိုးတွင် ဦးခေါင်းယာဘက်ချိုစောင်း ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ နှစ်ချက်၊ နဖူးပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ တစ်ချက်တို့ ရရှိခဲပြီး စစ်တွေဆေးရုံသို့ ချက်ချင်းပို့ဆောင်ခဲ့ကာ အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးကုသနေစဉ်အတွင်း ရဲတပ်သား သန့်ဇင်ဝင်းမှာ နံနက် ၁ နာရီတွင် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနှင့် မှတ်တမ်းပြုစုရေး ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက “ဒီမနက်ပဲ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုရဲမှူးကြီး သစ်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့က မှန်စီရဲကင်းကို သွားရောက်ပြီး တရားခံတွေကို ဖမ်းနေတယ်။ မနက် ၉ နာရီ သတင်းအရ တရားခံသုံးဦးကို မိထားပြီဖြစ်တယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တွေမြို့မ ရဲစခန်းက (ပ)၃၁၃၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၂ အရ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
Planet Evening News Sheet - 31-12-2013
Roadmap Online Magazine - January 2014
Commerce Journal - Vol 13 No 50 (30-Dec-2013)
လူရွှင်တော်အသင်းနဲ့ နာရေး ကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ၁၃ နှစ်ပြည့်
နာရေး ကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ရဲ့ ၁၃ နှစ်ပြည့်မှာ လူရွှင်တော် အသင်းလည်း ပါဝင်ကူညီနေပြီဆိုတဲ့ အကြောင်း အသင်းရဲ့ ဦးဆောင်သူ တဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်သူက သူ့ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာက တဆင့် ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ ဖော်ပြလာပါတယ်။
"ဒီနေ့နာရေးကူညီမှု့အသင်း၏ ၁၃ နှစ်ပြည့်မှာ ကျွန်တော်တို့လူရွှင်တော်အသင်းပါဝင် ကူညီနေကြ ပါတယ်ခင် ဗျာ" လို့ ဦးကျော်သူက ဆိုပါတယ်။
ဦးကျော်သူ တို့ ဦးဆောင်ကူညီပေးနေတဲ့ နာရေး ကူညီမှု အသင်းဟာ အခုနောက်ပိုင်း နာမည်ကျော်
မော်ဒယ်၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေဟာ ပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်လာတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
အလှမယ်တွေ ဖြစ်တဲ့ နန်း ခင်ဇေယျာ၊ ခင်ဝင့်ဝါ၊ ဂုဏ်ရည်အေးကျော်တို့လည်း ပူးပေါင်း ကူညီမှုတွေ ရှိသလို မကြာသေးခင်တုန်းကလည်း သင်ဇာဝင့်ကျော် လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်လာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
တချိန်ကတော့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဦးကျော်သူကို နာရေး ကူညီမှုအသင်းမှာ ကူညီမှုတွေ လုပ်ဆောင်ပေး လို့ သုဘရာဇာ မင်းသား နဲ့ ရုပ်ရှင် တွဲမရိုက်ချင်သူတွေတောင် ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ ရုပ်ရှင် အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပြောခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
မြန်မာ့ပညာရေး ပြောင်းလဲရန် အကြုံပြုချက် ဖိတ်ခေါ်
မြန်မာ့ပညာရေး အဆင့်အတန်းမြင့်မားရေးအတွက် ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ပညာရေးနှင့် အခြားဆက်စပ် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပညာရှင်များ ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကို အကြံပြုချက်များ ပေးပို့နိုင်တယ်လို့ ပညာရပ်နယ်ပယ် အသီးသီးမှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ၃၆ ယောက်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေက နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။
အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရှင်များ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ stakeholder များ ပါဝင်တဲ့ ကော်မတီနဲ့ အကြံပေးအဖွဲ့တွေ ဖွဲ့စည်းပြီး မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေနဲ့ ဆက်စပ်ဥပဒေတွေ (မူကြမ်းတွေ)ကို ပြုစုနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘက်စုံလွှမ်းခြုံ ပညာရေးကဏ္ဍ လေ့လာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ၀န်ကြီးဌာနများမှ ပညာရှင်များ၊ အတွေ့အကြုံရင့် ပညာရှင်များနှင့်၊ နိုင်ငံတကာ အကြံပေးပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပညာရေး နယ်ပယ်မှာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူတွေ ပူးပေါင်းပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်တဲ့ ထောက်ခံအကြံပြုချက်တွေအပေါ် အခြေခံပြီး ပြုစုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လဲ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် တက္ကသိုလ်အဆင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အဆင့် ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေကို ကျင်းပပြုလုပ်ပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ အကြံပြုချက်များ ရရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွေကို တက်ရောက်ဆွေးနွေး အကြံပြုနိုင်သလို၊ မတက်ရောက်ဖြစ်ရင်လဲ သတင်းစာထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေဆီကို စာတိုက်မှဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်မှ ဖြစ်စေ အကြံပြုချက်တွေ ပေးပို့ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျန်းမာရေးသတင်း ၃ ပုဒ်
By Sewsone Media
ယောင်္ကျားတို့ လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အမျိုးသမီးကို ကိုယ့်ဘက်ပါအောင် ဆွဲဆောင်နည်း
အဲအေးရှား ဘန်ကောက်-နေပြည်တော် ခရီးစဉ် ရပ်ဆိုင်း
မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကို ပြေးဆွဲနေတဲ့ ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း အဲအေးရှားရဲ့ ဘန်ကောက်- နေပြည်တော် လမ်းကြောင်း ပြေးဆွဲမှုကို စီးနင်းမယ့် ခရီးသည် အရေအတွက် နည်းပါးလို့ ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ ၂၇ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲ မတိုင်မီက စတင်ပြေးဆွဲခဲ့တဲ့ အဲအေးရှား လေကြောင်းလိုင်းမှာ ထိုင်ခုံ ၁၈၀ လူ အပြည့် လိုက်ပါစီးနင်းခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ထိုင်ခုံ ၁၀ ခုံစာလောက်ပဲ စီးသူရှိတယ်လို့ အဲအေးရှား သတင်းရင်းမြစ်တွေကို ကိုးကားပြီး သတင်းမှာ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က စတင်ပြေးဆွဲချိန်တုန်းကတော့ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲဝင် အားကစားသမားတွေ၊ နည်းပြတွေနဲ့ ထိုင်းအမျိုးသား အိုလံပစ်ကော်မီတီမှ ထောက်ပံ့အားပေးသူတွေ အပြင် ဆီးဂိမ်းသတင်း လိုက်ပါရယူကြတဲ့ သတင်းထောက်တွေ အများဆုံး စီးနင်းခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေပြည်တော်ဟာ စီးနေကျ ဖောက်သည်တွေနဲ့ အပန်းဖြေခရီးထွက်မယ့်သူတွေအတွက် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကို ဆွဲဆောင်ရာနေရာတွေနဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦ နည်းပါးမှုတွေကြောင့် ရွေးချယ်မှုနည်းပါးနေပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ခရီးသည်တွေပဲ ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်ကို သွားလာကြတာ များတယ်လို့ သတင်းပေးသူတွေက ပြောပါတယ်။
လက်ကျန်နိုင်/ကျဉ်းစိစစ်ရေး ကော်မတီ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့သလဲ
မနေ့က သမ္မတအမိန့်နဲ့ အင်းစိန်းထောင်က ပြန်လွတ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တချို့
သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စိစစ်ရေး ကော်မတီက သူတို့ ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကြေညာချက် တစောင်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန် ပါ တယ်။
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၁၄ ရက် (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်)
လက်ကျန်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေးကော်မတီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
၁။ လက်ကျန်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေးကော်မတီအား အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက် လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ စုစုပေါင်း အဖွဲ့ဝင် (၁၆)ဦးဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၂။ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းမှု ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် လည်းကောင်း၊ အမျိုးသား
ပြန်လည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အတွက် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်ခွင့် ရရှိစေရေးအတွက် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ မေတ္တာနှင့် စေတနာကို နားလည်ကြပြီး နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရေးတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည့် နိုင်ငံသားများ အဖြစ်သို့ ပြုပြင်
ပြောင်း လဲ နိုင်စေရေးအတွက် လည်းကောင်း ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၃/ ၂၀၁၃)ဖြင့် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများမှ (၆)ဦး၊ အရပ်ဘက် လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ (၇)ဦး၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများမှ (၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း အဖွဲ့ဝင် (၁၉)ဦးဖြင့် ကော်မတီ အား တိုးချဲ့ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၃။ စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးအား မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည် ထူထောင်
ရေး ဗဟို ဌာန ၌ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် စတင်ကျင်းပ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းဗဟိုဌာန၌ပင် ထပ်မံကျင်းပပြီး အဖွဲ့ဝင်များ၏ သဘောတူညီ ထောက်ခံ ချက် များအရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ (၈၇)ဦးအား တင်ပြပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရှိစေခဲ့ပါသည်။
၄။ စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကော်မတီဝင်များ၏ ထောက်ခံချက်များအရ အကျဉ်းသား / အကျဉ်းသူ (၂၃)ဦးအား တင်ပြခဲ့ပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရှိစေခဲ့ပါသည်။
၅။ စတုတ္ထအကြိမ် အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များ ၏ ထောက်ခံချက်များအရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ (၇၃)ဦးအား တင်ပြခဲ့ပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရှိစေခဲ့ပါသည်။
၆။ ပဉ္စမအကြိမ် အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ ဆဋ္ဌမအကြိမ် အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကော်မတီ ဝင် များ၏ ထောက်ခံချက်များအရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် အကျဉ်းသား (၅၆)ဦး အား တင်ပြခဲ့ပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရှိစေခဲ့ပါသည်။
၇။ သတ္တမအကြိမ် အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ အဋ္ဌမအကြိမ် အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ နဝမ အကြိမ် အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း ကျင်းပခဲ့ပြီး
ကော်မတီ ဝင် များ၏ ထောက်ခံချက်များအရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ (၆၉)ဦးအား တင်ပြခဲ့ပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရှိစေခဲ့ပါသည်။
၈။ ဒသမအကြိမ် အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ ဧကဒသမ အကြိမ် အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်းကျင်းပခဲ့ပြီး ကော်မတီ ဝင် များ၏ ထောက်ခံချက်များအရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ (၄၁)ဦးအား တင်ပြခဲ့ပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရှိစေခဲ့ပါသည်။
၉။ ဒွါဒသမအကြိမ် အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ကော်မတီ ဝင် များ၏ ထောက်ခံချက်အရ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် အကျဉ်းသား (၅)ဦးအား တင်ပြခဲ့ပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရှိစေခဲ့ပါသည်။
၁၀။ လက်ကျန်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေး ကော်မတီအား အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း (၁၉)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်း၍ လက်ကျန် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား စိစစ်ရွေးချယ်စေခဲ့ရာတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းဗဟိုဌာန၌ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ စုစုပေါင်း (၁၂)ကြိမ် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူ (၃၅၄)ဦးအား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရှိရေးအတွက် နိုင်ငံတော် သမ္မတထံသို့ တင်ပြ
၁၁။ ထို့အပြင် အခြားပြစ်မှုများနှင့် ငြိစွန်းသူများအတွက် နိုင်ငံရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆ ရသော
ပြစ်မှု များ ပယ်ဖျက်နိုင်စေရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ အမိန့်အမှတ် (၅၁/ ၂၀၁၃)ဖြင့် ပြစ်ဒဏ် လွတ်ငြိမ်း ခွင့် အမိန့်အား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
CD/DVDs ခွေပျက်တွေထဲက Data တွေကို 90% ထိ အလွယ်တကူ ပြန်ယူနိုင်မဲ့ Software လေးပါ..
1. အရင်ဆုံး ဒီနေရာကနေ Download & Install လုပ်ပါ.. >>> CD Recovery Toolbox
2. စက်ထဲကို ပျက်နေတဲ့ CD/DVD ထည့်ပေးပြီး NEXT ကို နှိပ်ပါ ။
3. သိမ်းထားမဲ့ နေရာကို ရွေးပေးပြီး NEXT ကို ထပ်နှိပ်ပါ ။
4. လိုချင်တဲ့ ဖိုလ်တွေကို ရွေးပြီး SAVE လုပ်နိုင်ပါပြီ ။
5. Save ပြီးအောင် ခဏစောင့်လိုက်ပါ ။
နတ်မြစ်အတွင်း လှေနစ်ရာမှ လူ ၂ ဦးသေ၊ ၇ ဦးပျောက်ဆုံး
မြန်မာ နယ်စပ် အာဏာပိုင်များကို ပိုက်ဆံပေး၍ မြန်မာဘက်သို့ ၀င်ရောက်ရန် ခိုးကူးနေသော နတ်မြစ်အတွင်းမှ လှေတစ်စီးကို နိရဉ္စရာ သတင်းထောက်က အမ်ိအရ ရိုက်ကူးထားစဉ်။
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလာနယ်စပ်ကို ပိုင်းခြားထားသော နတ်မြစ်အတွင်း လှေတစ်စီးနစ်ရာမှ လူ ၂ ဦးသေဆုံးပြီး ၇ ဦးပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ပျောက်ဆုံးနေသူများအထဲမှ သေဆုံးသွားသူ အလောင်း (၂) လောင်းအား ယမန်နေ့က ရေထဲက ပြန်လည် ဆယ်ယူရရှိခဲ့သည်ဟု ယနေ့ထုတ် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ သတင်းစာများတွင် ဖေါ်ပြသည်။
သေဆုံးသွားသူများမှာ ဖါတေမာဘေဂွန် (၅၀) နှစ်နှင့် မူဟာမတ် အလီယက် (၈) နှစ်တို့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့အား မြန်မာနိုင်ငံကလာသော မွတ်ဆလင်များနေထိုင်ရာ တက်ကနက်မြို့နယ် နော်ယာပါရာ ဒုက္ခသည်စခန်းရှိ မိသားစုများထံသို့ ဘင်္ဂလာ အာဏာပိုင်များက လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သော တနင်္လာနေ့က ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ လူ ၁၈ ဦးကို တင်ဆောင်၍ မြန်မာဘက်သို့ တရားမ၀င်ခိုးကူးသည့် လှေ တစ်စီး နတ်မြစ်ထဲတွင် နစ်မြုပ်ရာ လူ (၉) ဦးကို အနီးအနားရှိ လှေများက ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ကျန် ၉ ဦးမှာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
လူသေအလောင်း (၂) လောင်းကို ပြန်လည် ဆယ်ယူရရှိခဲ့ပြီး၊ ကျန် (၇) ဦးမှာဆက်လက် ပျောက်ဆုံးနေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
တက်ကနက် အခြေစိုက် အမှတ် (၄၂) ဘီဂျီဘီတပ်ရင်းမှူးမှ သတင်းထောက်များသို့ ပြောသည်မှာ သူတို့အနေဖြင့် လှေနစ်သူများကို ကယ်တင်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင်းဆိုသော် လှေမှာ မြန်မာရေပိုင်းနက်အတွင်း နစ်သွား၍ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက်နယ်စပ်တွင် မြန်မာဘက်က နယ်စပ် ခြံစည်းရိုးကိုကာရံပြီး လုံခြုံရေး တင်းကျပ် ထားသည်ဟု ပြောကြားသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ခိုလုံနေထိုင်သူများ မှောင်ခိုလှေများကို အသုံးပြု၍ မကြာခဏ နတ်မြစ်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး မြန်မာဘက်သို့ တရားမ၀င် မကြာခဏ ၀င်ရောက်နေကြသည်မှာ အထူး အံ့သြဖွယ်ရာ ဖြစ်ကြောင်း နယ်စပ်နေ ပြည်သူများက နိရဉ္စရာသို့ ပြောကြားသည်။
ညဘက်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်လျှင် ဘာဖြစ်တတ်သလဲ
ညဘက် အိပ်စက်တဲ့ အခါမှာ အိပ်ပျော်လိုက် မပျော်လိုက် ဖြစ်တာဟာ မကောင်းတဲ့ လက္ခာပါပဲ။ ထို့ပြင် အိပ်စက် မှုတွေလည်း မှန်ကန်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဒီနေ့ ည ၁၀ နာရီအိပ်ပြီး နောက်နေ့ ည ၁ နာရီကို ပြောင်းအိပ်တာဟာ မကောင်းပါဘူး။ ညဘက်တွင် နှစ်ချိုက်စွာ အိပ်ပျော်ခြင်းဟာ လူတစ်ယောက် အတွက် များစွာသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
(၁) နှလုံးရောဂါ ရှိသူများအတွက် ကောင်းမွန်ခြင်း။
(၂) ကင်ဆာရောဂါ အတွက်လည်း ကောင်းမွန်ခြင်း။
(၃) စိုးရိမ်စိတ် (သို့) ကြောင့်ကြ စိတ်များကို ကင်းဝေးစေပါတယ်။
(၄) စိတ်ဓာတ် တက်ကြွစေခြင်း။
(၅) မှတ်ဥာဏ် ကောင်းမွန်စေခြင်း။
(၆) ဝိတ် မတက်ခြင်း။
(၇) ခန္ဒာကိုယ် ကြံ့ခိုင်စေခြင်း။
(၈) စိတ်ဓာတ်ကျမှုများကို ပြေပျောက်စေနိုင် ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
By ကျော်လင်းနိုင် (Yoyarlay)
မြိတ်မြို့နယ် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာပေါင်းစုံ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲနေ့၌ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ဘောလုံးအသင်းနှင့် ခရိုင်အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင် ဘောလုံး အသင်း ချစ်ကြည်ရေးဘောလုံးပွဲ ကစားမည်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်၊ မြိတ်မြို့၌ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖလား၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာပေါင်းစုံ ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲကို (၂-၁-၂၀၁၄) ရက်မှ (၁၄-၂-၂၀၁၄) ရက်အထိ မြိတ်မြို့၊ မြို့မအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၄င်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို မြိတ်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ရပ်ကွက် (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၂၂) အုပ်စုတို့ဖြင့် အသင်းပေါင်း (၃၄) သင်းအား အုပ်စု (၈) စုခွဲကာ တစ်နေ့လျှင် (၂) ကြိမ် နံနက် / ညနေ ယှဉ်ပြိုင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖွင့်ပွဲနေ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂) ရက်နေ့၊ ညနေ (၃း၀၀)နာရီအချိန် ဖွင့်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ဘောလုံး အသင်းနှင့် မြိတ်ခရိုင် အမျိုးသမီး လက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်းတို့ ချစ်ကြည်ရေးပွဲ အနေဖြင့် ကစားမည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် ပတ်လည် အသင်းများဖြစ်သည့် ကလွင်ကျေးရွာ အုပ်စု အသင်းနှင့် မြိတ်တောင်ကျေးရွာ အုပ်စု အသင်းတို့ ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင် ကစား သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဘောလုံးပွဲ လာရောက်ကြည့်သူ အများပြည်သူများ အနေဖြင့်လည်း အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ရန် မလိုဘဲ လွတ်လပ်စွာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အစ္စရေးက ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသားများအား တတိယအကြိမ်မြေ...
နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ ဆွေးနွေးတင်ပြနိုင်မ...
သင်္ဘောပေါက်ကွဲမှုမှ ပျောက်ဆုံးနေသူများမှ သေဆုံးလျက် ...
ပေါက်တောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/သူများအသင်းမှ (၂၂၉) နှစ...
အာဏာရသူများ ရှုံးနိမ့်နိုင်သည့် အနေအထား ဖြစ်ပေါ်လာပါ...
EMG သတင်းထောက် မခိုင်အား ဥပဒေကို လိုသလိုအသုံးပြု၍ ...
သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖြစ် မြေဧက ၆၀၀၀ နီးပါး သတ...
၂၀၁၄ နှစ်သစ် ကြိုဆိုခြင်းအား ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ညက ရန်က...
၂၀၁၃ ခုနှစ်၏ အလှဆုံးမိန်းမပျို Top 25 စာရင်းတွင် မ...
နှစ်သစ်ကူးတွင် ပထမဆုံး မီးလောင်မှု တောင်ကြီး ကန်အော...
အာဆီယံခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံမည့် အရပ်ဘက်အဖွဲ...
ရပ်ရွာအောက်ခြေအဆင့်ကနေ မြှင့်တင်ပြောင်းလဲရမယ့် မြန...
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုကို ရိုးရာဓလေ့ဖြင့်ေ...
စစ်တွေမြို့နယ်တွင် တာဝန်ကျ ရဲတပ်သားနှစ်ဦးအား ဘင်္ဂါ...
လူရွှင်တော်အသင်းနဲ့ နာရေး ကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ၁၃...
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျန်းမာရေး...
ယောင်္ကျားတို့ လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အမျိုးသမီးကို ကိုယ်...
ညဘက်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်လျှင် ဘာဖြစ်...
မိတ္ထီလာ ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း (ရ...
ရင်သားကင်ဆာအား ပိုမိုတိကျစွာ စမ်းသပ်နိုင်မည့် 3D M...
တက္ကသိုလ်များ ဗဟိုကောင်စီဖွဲ့ရေး မူကြမ်း တက္ကသိုလ် ဆ...
စစ်တွေတွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရ၍ ရဲတပ်သား တစ်ဦ...
တော်ဝင်လုပ်သားများကို ကြားကာလနစ်နာကြေး ကျပ်သိန်းနှ...
ပန်းလှိုင်မြစ်ကမ်းမှ ကျူးကျော်များအား နှင်ထုတ်ခြင်း...
သမ္မတလွတ်ငြိမ်းခွင့်အမိန့်ဖြင့် အိုးဘိုထောင်မှ ၅၀၅ ...
စစ်တွေတွင် စိတ်ကြွဆေးပြား ၂၀၀၀၀ ဖမ်းမိ
ကြုံရင် ကြုံသလို လှူတဲ့ အိချောပို
ကမ္ဘာအ၀န်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် သတင်းထောက် ၇၀ အသတ်ခံခဲ့ရ
၂၀၁၄ ကို ကြိုဆိုတဲ့ နှစ်သစ်ကူးည (ဓာတ်ပုံ)
The Hot News Weekly Journal (3-9, Jan, 2014)
ရုရှားမြို့မှာ ဒုတိယအကြိမ် အသေခံဗုံးခွဲမှုကြောင့် လ...
ရတနာပုံနေ့စဉ်သတင်းစာ (၁-၁-၂၀၁၄) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၁-၁-၂၀၁၄) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်ပေးမှု နိုင်ငံတကာ သတိနှင့်တ...
ဘ၀က ချစ်စရာ ကောင်းပါတယ်
ရခိုင်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်ကျဆုံးနေ့ သတင်း ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့...
လူသစ် စိတ်သစ် အကြံဉာဏ်သစ် တို့ဖြင့် နှစ်သစ်ဆီသို့
New Light of Myanmar သတင်းစာ (၁-၁-၂၀၁၄)
မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ (၁-၁-၂၀၁၄)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့် ...
တရားရင်ဆိုင်ဆဲ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၁၃၀ ပြန်လွတ်
သွားလည်ကြည့်လျှင် သနားကြမည့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရက်စက်ကြမ်...
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် မဟာဗန္ဓုလတံတားအဆင်းတွင် ယာဉ်တို...
သုခချမ်းသာ ရစေဖို့ရာ ထာဝရယတြာ
Time (New Year) နှစ်သစ်ကြို အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းများ
ထူးခြားထင်ရှားမြန်မာပြည်သား ၂၀၁၃ ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်
ကြံ့ခိုင်ရေး အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု...
“မဟာ” ကြောင့် နောင်တမရခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ ဇော်ဝင်းထွဋ်နဲ့...
၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲတွင်...
၉၆၉ လှုပ်ရှားသူဟု စွပ်စွဲကာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် ကိုရဲ...
မြန်မာ့နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်ရေးဘဏ်ကို ကန်ဒေါ်လာ သန်း...
ဖော်မြူလာဝမ်းပြိုင်ကား ချန်ပီယံဟောင်း မိုက်ကယ်ရှုးေ...
၂၀၁၃ ခုနှစ် ပြည်တွင်း မိုဘိုင်းဖုန်း ဈေးကွက်တွင် ...
ရှမ်းပြည်တပ်မတော်နှင့် အစိုးရ တွေ့ဆုံ
ဒီဇင်ဘာ လွတ်ငြိမ်းချမ်သာခွင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်...
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၄၇ ချ...
facebook က သင့်ကို Lock ချခြင်း Block ရခြင်း အကြော...
မသန်စွမ်း ဥပဒေမူကြမ်း ၂၀၁၄ နှစ်ဆန်းတွင် လွှတ်တော်တင...
အလွန်သတိထားစောင့်ကြည့် ရတော့မည် အိမ်နီးချင်း(သို့မ...
လူမှု အကျိုးပြု မလုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများ ရင်းနှီးမြှုပ်...
အီဂျစ်အစိုးရက အယ်ဂျာဇီးရား သတင်းသမား ၄ ဦးကို ဖမ်းဆီး
SEA Games ကုန်ကျစရိတ် လွှတ်တော်တင်မည်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမည်ကို စိုးရိမ်၍ မိခင်ဖြစ်သူက သားဖြစ်...
ကောင်းကင်ဘုံ၌ စစ်တုရင်အတူကစားရန် အိမ်နီးချင်းကိုသတ...
အပန်းဖြေခရီးထွက်ရင်း ရေကူးရာမှ ကျောင်းသား ၇ ဦးရေန...